YEYINTNGE(ကနဒေါ): Monday, February 28
အဟာရစာစောင်( Issue 120 )
BY YeYint Nge ... 2/28/20110comment
Reflecting on the International Tribunal on Crimes against Women of Burma
The Impact of People's Tribunals: Reflecting on the International Tribunal on Crimes against Women of Burma
When: 12:30-2pm, March 3, 2011
Where: 519 YRT, York University
Organized by the Centre for Refugee Studies and the York Centre for Asian Research, York University
Please visit www.cc4fb.org to find out detail and the Programme.
I hope many of you will be able to attend the above mentioned anniversary panel discussion at York University, Toronto to mark the first anniversary of the International Tribunal on Crimes against Women of Burma which convened in New York.
The anniversary panel will bring together organizers of the International Tribunal on Crimes against Women of Burma, members of the Burmese community, and scholars to reflect on the achievements of the Tribunal and of the larger "people's tribunal" phenomenon.
by Soe Wei Yan Htoon on Monday, February 28, 2011 at 3:45am
မနေ့ကမှ လောလောလတ်လတ် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွေရော၊ လာဂျစ်စတစ်တွေရော တလုံးတခဲကြီး စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုတာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် နဲ့ပြောပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားမလို့ ဆိုင်ကယ်လေးထုတ်လိုက်တယ။် ဓာတ်ဆီဖွင့်ကြည့်မိတော့ မလောက်လောက်ဘူးထင်တာနဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်ကို သွားလိုက်တယ။် အိမ်နားနီးနီးနားနားက ဓာတ်ဆီဆိုင်ဆိုတော့လည်း ဘာရှိရမလဲ မှောင်ခိုပေါ့ဗျာ လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာ ပုလင်းတွေထောင်ပြီး လူသိရှင်ကြားရောင်းတဲ့ မှောင်ခိုပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့လို မော်တော်ဆိုင်ကယ် အမြောက်အမြားရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာတော့ ဓာတ်ဆီကို အဲသလို မှောင်ခိုဆိုင်လေးတွေမှာ ၀ယ်ရင် တစ်ကွာတ ဆိုပြီး အယ်ပိုင်း သောက်ရေသန့်ဗူးလေးတွေနဲ့ ရောင်းသကိုးဗျ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက အစဉ်အဆက် တည်ရှိလာခဲ့တဲ့ အဲဒီ တစ်ကွာတ=ရေသန့်တစ်ဗူး ဆိုတဲ့အချိန်အတွယ်ကိုဖြင့် မှားတယ်လည်း မပြောပေါင် မှန်တယ်လည်း မပြောပေါင် ဒီတိုင်း ထည့်တာဘဲ။
ဒီနေ့တော့ ခါတိုင်းလိုဘဲ ထည့်ပြီးလို့ တစ်ထောင်တန် တစ်ရွက်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကို အဲဒီက ကောင်လေးက ကြည့်ပြိး အစ်ကို (၁၃၀၀) ဖြစ်သွားပြီတဲ့။ ဟိုက် မြတ်စွာဘုရား ဆီတစ်ကွာတ (၁၃၀၀) ဆိုရင် တစ်ဂါလံဆို (၅၅၀၀) သာသာလောက်ရှိနေပြီပေါ့။ နင့်မေကလွှား နောက်ရက်တွေတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ခြေလျှင်သွားမှဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ ဓာတ်ဆီဆိုင် နားတင် ကြက်သေသေနေသည်မှာ အတော်ကြာသည်။ ဒီတိုင်းဆိုရင် ကျန်တဲ့ ဆန်ဈေးတို့ ဆီဈေးတို့ ကြက်သွန်တို့ အာလူးတို့ ဘာမှ ပြောမနေနဲ့ အကုန်တက်တော့မယ်။ ငါ Facebook ထဲမှာ ကန်စွန်းရွက်၊ အာလူး ဈေးတက်ပြီ လို့ ခန ခန ပြောမိတာ မှားပြီနဲ့တူတယ်။ခက်တော့ခက်နေပြီ။
မဖြစ်ဘူး ဟိုတစ်လောက အစိုးရက ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ပေးလိုက်တဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကလည်း စစပေး တဲ့နေ့ ကတည်းကိုက ကြိတ်ကြိတ်တိုး နေရသည်မှာ မပြောပါနှင့်တော့။ ဆီတစ်ဂါလံ၊ ဂါလံဝက် ရဖို့အရေးကိုတော့ နှစ်နာရီလောက် တန်းရမှာ အတော်လေး ကသိကအောက်နိုင်လှသည်။ နောက်ပြီး ဒီလို တန်းစီတဲ့ လူတွေကလည်း ကိုယ်လို သူလို သာမာန် တစ်နိုင်သုံးဖို့ လာပြီး နှစ်နာရီ တန်းကြတာ မဟုတ်။ ပြန်ရောင်းစား၊ လှောင်ထား သူတို့၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများသာလျှင် တပည့်တပန်းများနှင့် အိမ်ရှိ ကား၊ ဆိုင်ကယ် အကုန်ထုတ်သုံးကာ တန်းစီကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်လို ဂါလံဝက်လောက်နှင့် နှစ်နာရီ သွားတန်းစီ လို့ကတော့ ရူးသွားမည်။ မဖြစ်သေး။ သက်သာတာကတော့ သက်သာသည် သူတို့လို တန်းစီနိုင်လျှင် တစ်ဂါလံကို (၂၅၀၀) နှင့်ရမည်။ ဟော ပြောရင်းဆိုရင်း ဒီနေ့က (၂၈) လကုန်တာဘဲ။ March လ (၁) ရက်နေ့ကစပြီး အဲသည် ဆိုင်တွေမှာတောင်မှ တစ်ဂါလံကို (၃၀၀၀ ကနေ ၃၅၀၀) ကြားကို တက်ပြီး ရောင်းတော့မည်ဟု ဆိုင်မှ ၀န်ထမ်းများက ပြောလိုက်သည်တဲ့။ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်း ပြောသလို သေဘီဆရာ ပေါ့။
ဘာတတ်နိုင်မှာတုန်း။ ဒီနေ့ကစပြီး လက်ဖက်ရည် မသောက်နဲ့တော့။ ကွမ်းမစားနဲ့တော့။ ထမင်းစားပြီး Ruby လေးဖွာလိုက်ချင်တာ တွေဘာတွေ မလုပ်နဲ့တော့။ ဓာတ်ဆီဈေးက သိကြားမင်း ဖင်တက်ဆောင့်နေဘီ။ မခက်ဘူးလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရပမလဲ။ ဆိုင်ကယ်မစီးရလို့ ဘာမှမဖြစ်။ သူများလို ကားလည်းမရှိ မလွမ်းပါ။ သို့သော် ထမင်းငတ်မှာတော့ ကြောက်သည်။ ငတ်တော့မငတ်ဘူး မသေရုံစားရမှာတော့ မဖြစ်သေး။ အခန့်မသင့်လျှင် ငတ်သွားနိုင်သည် မဟုတ်လား။ ရွှေဈေးတက်တာလည်း ကိုယ်နဲ့မဆိုင်၊ ဒေါ်လာတွေ မာနေတာ ပျော့နေတာလည်း ကိုနဲ့ မဆိုင် ဆန်ဈေးတက်တာကတော့ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်လာသည်။ အို .. ဘုရားသိကြားမလို့ ပြန်ကျပါစေ။ သို့သော် ကျမည့် အရိပ်အရောင်လေးက မသန်း တက်မည့် အရိပ်တွေသာ တရကြမ်းတက်လာသည်။ ဒါပြီးရင် သင်္ကြန်လာတော့မည် သင်္ကြန်နားနီးရင် ဈေးတက်နေကြ သိပ်မဆန်း။ ဒါပေမယ့် တက်ပြီး ပြန်မကျတော့ပေ။
ဒီကြားထဲ မတိုးသေးသော လစာ များကလည်း တယ်လည်း ပြောကြသကိုး။ သမ္မတက သိန်းငါးဆယ် ရတာနဲ့ဘဲ ၀န်ထမ်းတွေက တပြုံကြီး လစာ လိုက်တိုးတော့မယောင်ယောင် ပြောကြသည်။ လေလံလွှဲထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ဓာတ်ဆီ ဈေးတက်တော့မယ်၊ လစာတွေတိုးတော့မယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ရွှေ ကုန်ဈေးနှုန်းက ဖင်မငြိမ်ချင်တော့။ အမှန်တော့ တွေးကြည့်ရင် ဘာဘာ ဘာမှ မဆိုင်။ လစာတွေတိုးမယ်ကြားလို့ ဈေးလေးနည်းနည်းတက်မယ်နော် ဆိုတာမျိုး ဘာဆိုင်လို့လဲ။ လစာတွေတိုးလာတုန်း ၀န်ထမ်းတွေ ၀ယ်ပါစေ ချမ်းပါစေ မမြင်ဖူးတဲ့ အရာတွေ မစားဖူးတဲ့ အစားတွေ မြင်ကြပါစေ စားကြပါစေလား ဘာကြောင့် တန်ရာ တန်ရာပေါ့ ဆိုပြိး ဈေးကို လိုက်တက်နေရပါလိမ့်။ ခက်တာဘဲ။ လောကမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းက လွဲရင် ဘယ်သူ့မှ မကြောက်ဘူးကွ ဆိုပြီး အရက်မူးလာတိုင်း အော်တတ်သည့် အရပ်ထဲက ဦးတုတ်ကြီး စကားကို သွားသတိရမိသည်။ ဟုတ်ပေသားဘဲ။
ကျွန်တော် ကျောင်းတက်တုန်းက ပထမနှစ်ကတည်းကစပြီး တတိယနှစ်မှ ဂုဏ်ထူးတန်းထိ လေးနှစ်တိတိ Software Engineering တွင် လေဆိပ် တစ်ခုအကြောင်းသင်သည် ကိုသွားအမှတ်ရမိသည်။ ပထမနှစ်ကတည်းက လေဆိပ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းဆိုပြီး လေဆိပ်ထဲမှာ Software တွေဘယ်လိုသုံးတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုး အလုပ်လုပ်ကြတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် စသည်ဖြင့် သင်လိုက်ရသည်မှာ (၄) နှစ်သာ ကုန်သွားတယ် လေဆိပ်က ဆောက်လို့ မပြီးသေး။ တစ်ကယ်တန်း အပြင်မှာ မြင်ချင်လို့ သွားကြည့်လိုက် ကိုယ်တွေမြင်ဖူးတဲ့ လေဆိပ်ဆိုတာ လေဆိပ်ခန်းမဆောင်ထဲမှာ စာကလေးငှက်တွေတောင် အသိုက်လုပ်နေကြသေးတယ်။ ၀င်ပေါက်က လုံခြုံရေးတွေဖြင့် အိမ်များတောင် ငိုက်လို့။
ထားပါတော့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာကိုလည်း Business Management Diploma မတက်ခင်ကတည်းက နားလည်အောင် လုပ်လိုက်ရတာ။ အဲဒီ အချိန်တုန်းကများ ကျော်ဝင်းတို့ နေဇင်လတ် တို့ ကျုပ်တို့ အသဲစွဲပေါ့။ ခုနေခါများ ကျုပ်ညီတွေ၊ ညီမတွေက ကိုကို ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ အဲဒီလိုကြီး တန်းစီ ရတာလားဟင်လို့ မေးလာရင်ဖြင့် ငါးပါးမှောက်ရချည်သေးရဲ့။ ဘယ့်နှယ်လုပ် ပြန်ဖြေရပမလဲ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ ဈေးနားတင်ကွက်ပြီး စီးပွားဖြစ်နေကြတာကို ပြောတာပါကွ လို့ပြန်ဖြေရင် ကောင်းမလား အေးအေးဟုတ်တယ် ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ အဲသဟာမျိုး ကြိတ်ကြိတ်တိုး နေပူကြီးထဲမှာ တန်းစီပြီး ရန်ဖြစ်နေကြရတာကွ လို့ ပြန်ဖြေရင်ကောင်းမလား။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သင်ပေးလိုက်သည့် စာတွေထဲက တစ်ခုမှ ပြန်ဖြေလို့ မရနိုင်။ ခက်တော့ခက်နေပြီ။
အစကတော့ အစိုးရဆိုင်တွေက ဘ၀ပြောင်းပြီး ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ အလွန်ပျော်ခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်။ ငွေအကြွေ တစ်ရာ ငါးဆယ် လောက်လည်း ကျုပ်ကတော့ လိုချင်တာဘဲ။ တန်ရာတန်ကြေးပေးရင် တန်ရာတန်ကြေးကို ယူပြီး ပြန်အမ်းရမယ်လေ။ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ တစ်ရာလောက် ငါးဆယ်လောက် ပိုတာကို ပြန်မအမ်းလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ အစိုးရမင်းများကို ကြောက်လို့သာ သည်းခံနေရတာ ဟောခုတော့ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ကွာ ငှဲငှဲ။ အလို . အစ်ကိုရေ အနုတ်မရှိလို့ နောက်မှယူဗျာ တဲ့။ ဟိုဦးလေးကြီးက ဘာလုပ်နေတာလဲ တစ်ဆို့ တစ်ဆို့ လုပ်မနေနဲ့လေ။ မရဘူး တစ်ခါထုတ် တစ်ဂါလံဘဲ မကျေနပ်ရင် ကြိုက်တဲ့ဆီသွားတိုင်။ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ပြမှ ရမယ် မဟုတ်ရင် မရဘူး။ အလို အလို အလို ဈေးဝယ်သူ စားသုံးသူတို့အား ဖော်ရွေပျူငှာစွာ ဆက်ဆံခြင်းသည် ဈေးကွက်စီးပွားရေး၏ အသက်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းတို့၏ အသက်ပင် မဟုတ်လော။ ကျောင်းတက်စဉ်ကလည်း ထိုအတိုင်းသင်ခဲ့ရပါ၏။ ကျောင်းပြီးတော့ စာအုပ်ဖတ်တော့လည်း ထိုသို့ပင်ဆိုပါ၏။
ယခုမူကား ထိုသို့မဟုတ် ကျုပ်တို့ ဓာတ်ဆီတိုးသူ ပြည်သူတစ်သိုက်တို့သည် သင်းကလေးတို့ အလုပ်ရှုပ်အောင် လာလုပ်နေသူများပင်ဖြစ်ကြ၏။ သင်းကလေးတို့ဓာတ်ဆီရောင်းပေးမှသာလျှင် ကျုပ်တို့က မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကလေးများ မော်တော်ကားကလေးများကို တဖွတ်ဖွတ် မောင်းနှင်ခြင်း ပြုနိုင်ကြမည်ဖြစ်၏။ သင်းကလေးတို့မှတပါး အခြား ကယ်မည့်သူ မရှိ ဟု သင်းကလေးတို့ စိတ်တွင်းဝယ် ထင်မှတ်နေကြချေသည်။ အို .. HR ဟုခေါ်သော Human Resources ကောင်းတို့သည်ကား မျက်နှာထား တင်းလေစွ။
တစ်ကယ်တော့ စက်သုံးဆီ ပြသနာကို ကိုင်တွယ်သည့် နေရာတွင် အစိုးရမင်းများ အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ငါ့လက်က လွတ် ဗြွတ် ဆိုပြီး ရော့ အင့် ယူကြ ဆိုပြီး ဗယုတ်သုတ်ခ ပေးလိုက်ရန် မသင့်ပေ။ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန် စံညွန်းတို့ဖြင့် ပြည်သူလူထု အဆင်တပြေရှိအောင် အာမခံချက်ပေးနိုင်သော Company လုပ်ငန်းများကိုသာ လွှဲပြောင်းပေးသင့်သည် မဟုတ်လော။ Company တို့အနေဖြင့်ကလည်း ရရင်တော့ပွတာဘဲ နောက်လာမှ နောင်ရှင်း လောလောဆယ် ဆွဲထားလိုက်ရင် ဆိုသော စိတ်ထားမျိုးဖြင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံချက်၊ ခွဲခြမ်းလေ့လာချက်၊ အစီရင်ခံစာ၊ လေ့လာမှု၊ သုသေသန စသည်ဖြင့် ဘာမှ ဘာမှ အသင့်မဖြစ်သေးဘဲ လွှဲပြောင်းရယူပြီးမှ ကြုံဇာတ်ကကြလျှင်လည်း မဟုတ်သေး။
ကြုံသလိုလုပ် ကြုံသလို ဖြေရှင်းကြရင်ဖြင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့သော ဖာသည်နိုင်ငံကြီးဘ၀ လှလှပပရောက်ကြပေတော့မည်။ ရွှေနိုင်ငံကြီးသည် ရွှေယောင်ဆောင်ထားသော ဖာသည် နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေပေတော့မည်။ ကျန်သေးသည် အများကြီးရှိသေးသည်။ ပြောမကုန်အောင် ရှိသေးတယ်။ တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်များထက်ပင် နားထောင်ရခက်သော ဇာတ်လမ်းတို့ ရှိသေးသည်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းဟု ပြောလာချေသော် ခက်လှသည်။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာ ဆိုရင်ဖြင့် စီးပွားရေးဦးတည်ချက်တွင်းမှ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ရေးဟူသော စာသားလေးမှုံဝါးဝါးသာ ရှိသည်။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာမူကားဘာမှမရှိ။
ဦးပိုင်ကို ဈေးကွက်စီးပွားရေး ပြယုဂ်အဖြစ်ထင်နေလျှင်၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုသည်မှာ တန်းစီပြီးတိုးကြရတာပါကွာ ဟုထင်ကြလျှင်ဖြင့် မတွေ့းနိုင်တော့ပြီ။ ပုဂ္ဂလိက ဓာတ်ဆီဆိုင်များကို ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါသည်ဟု တစ်ဖက်ကပြောပြီး ဓာတ်ဆီဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်မှာမူ လွန်စွာကျယ်ပြန့်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းများကသာ ၀ယ်ယူတင်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအစိုးရမင်းများထံမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ပြီး ဆိုင်များက ၀ယ်ယူကြကာ ပြည်သူများက ထိုမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ဝယ်ယူကြစေလိုခြင်း ဟူသောမည်သည့်နိုင်ငံများတွင်မှ မကြားဖူး မကြုံဖူးသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ပိုင်ခွင့် အသစ်အဆန်းများကို စိတ်ကြိုက်တီထွင် နေကြမည် ဆိုရင်ဖြင့် ...... အိုး စောင့်လို့ကြည့်ချင်သေး စောင့်လို့ ကြည့်ချင်သေး ...........
PDP ISSUE 5/5
ဒီဗွီဘီ ၀န်ထမ်းများအပေါ် ရာထူးမှ ဖြုတ်သည့်ကိစ္စ စစ်အစိုးရ အလိုကျ ဖြစ်သွားပြီ
၁။ ။ ဒီဗွီဘီ-မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှ ၀န်ထမ်းများအပေါ် ရာထူးမှ ဖြုတ်ထုတ်လိုက်ခြင်းမှာ အလှူရှင်များ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှူကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသော သူများ၏တင်ပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။ အခြားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှ မရှိကြောင်းကိုလည်းသေချာစွာဖတ်ပြီးသောအခါ နားလည်ရပါသည်။ ထို့ ကြောင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ဤအချက်နှစ်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းစာ ရေးသား အကြံပေးလိုက်ရပါသည်။
၂။ ။ ပထမရှေးဦးစွာ သိရှိစေရန်မှာ ဤထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသော သူများ၏ လုပ်ငန်းချိန်ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေစဉ် တာဝန်ကျေပြွန်မူ ရှိမရှိ ဆိုခြင်းကို လေ့လာမိပါသည်။သူတို့ ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်၇ွက်နေစဉ်အလုပ်အားရက်များမှာပါမက သူများတကာအားလပ်ရက်များဖြစ်သော ရုံးပိတ်ရက် တွင်ပင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သော သူများဖြစ်သည်ကိုလည်း သိရှိကြပါသည်။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ မှာ လုပ်ငန်းခွင် အလုပ်သမား စည်းကမ်းများဖေါက်ဖျက်ခြင်းမရှိခဲ့ ။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်မူများအပေါ်ခေါ်ယူသတိပေး အပြစ်ပေးခြင်း ခံရသူများ မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်းသိရှိရပါသည်။ ဤသည်မှာ အလုပ်သမားတဦး၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းများကို မချိုးဖေါက်ခြင်းကို သက်သေပြနေမူဖြစ်ပါသည်။
၃။ ။ အလှူရှင်များမှ ထောက်ပံ့ကြေးနည်းပါးနေ၍ တာဝန်ကြေအလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းခွင်မှထုတ်ပယ်ခြင်းမှာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဥပဒေကို မချိုးဖေါက်ဘဲ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အကယ်၍ အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်တို့ ၏ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်လာပြီးဥပဒေမဲ့အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းမျိုး ရှိလာလျှင်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားခံစားခွင့် တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ။ အလှူရှင်များ၏ ထောက်ပံ့မူကြောင့် ဒီဗွီဘီ မြန်မာပိုင်းဝန်ထမ်းများ လျော့ချလိုက်ခြင်းသည်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိခံစားရပါသနည်း ဆိုသော မေးခွန်းများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။
( က ) ဒီဗွီဘီဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးထက်အောင်ကျော်၊ ဒေါ်ခင်နှင်းထက် ၊ ဒေါ်နန်းခမ်းကယောက် တို့ သုံးဦးမှာအရည်အချင်းပြည့် နိုင်ငံရေးသမား သတင်းသမားများဖြစ်သည်။
( ခ ) သူတို့ သုံးဦးမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒီမိုကရေစီလိုလားသော ပြည်သူများကို အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်များအား တင်ပြပေးနိုင်သော ပြည်သူချစ်သည့်သတင်းသမားများဖြစ်သည်။
( ဂ ) သူတို့သုံးဦးအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းသည် ဒီဗွီဘီ၏ နိုင်ငံရေးသတင်းမီဒီယာတခုကိုအရုပ်ဆိုးစေခြင်းဖြစ်သွားသည်။
၅။ ။ အထက်ပါတင်ပြချက်များသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ လူကြီးမင်းများ၏ဆုံးရှုံးမူကြီးတခုဖြစ်သည်။
( က ) သူတို့ သုံးဦးကဲ့သို့နိုင်ငံရေးသတင်းသမား စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မရနိုင်တော့ ။
( ခ ) သူတို့ သုံးဦးကဲ့ သို့ပြည်သူချစ်သော သတင်းသမားများ ဆုံးရှုံး ရသွားပြီ။
( ဂ ) ဒီဗွီဘီမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ဒီဗွီဘီ လုပ်ငန်းတခုလုံးအပေါ် သိက္ခာကျဆင်းအောင်လုပ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
( ၆ ) သူတို့ ၏ သတင်းတင်ပြချက်များကို ပြည်သူတရပ်လုံး လက်ခံထားကြသည်။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ အပေါ်ပြည်သူတို့စာနာချစ်ခင်ကြသည်။ ယခုသူတို့ အပေါ် ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဒီဗွီဘီ မြန်မာပိုင်းသတင်းဌါနသည်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ တို့နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ တို့ မှ တာဝန်ရှိသူများ လက်ထဲတွင် မရှိကြ။ယင်းရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌါနသည် ပြည်သူတရပ်လုံးပိုင်ဆိုင်သောသတင်းဌါနဖြစ်သည်။၀န်ထမ်းများကိုလျော့ချခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားများ အစီအစဉ်ကို လျော့ချဖြတ်တောက်ရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်နေမှုမှာ ရှူးသွပ်မူတခုသာဖြစ်သည်။ အလှူရှင်များမှ ထောက်ပံ့ကြေးနည်းပါး၍ ၀န်ထမ်းများ အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရခြင်းမှာ အခြားအလုပ်ဌါနများနှင့် ကုမဏီ များတွင် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ စစ်အစိုးရ၏ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရမူများနှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်၇ွက်နေသော သတင်းသမားများကိုထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းမှာတော်လှန်ရေးကဏ္ဍတွင် အားလျှော့သွားစေပါသည်။တချိန်တည်းမှာပင် နအဖစစ်အစိုးရအပေါ် အထူး အားသာချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။နအဖစစ်အစိုးရသည် ဤသတင်းသမားသုံးဦးအပေါ် ရာထူးမှထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် ယခုအချိန်တွင် အောင်သေအောင်စားပျော်မြူးနေကြပါတော့မည်။ သူတို့ ၏ အတိုက်အခံထဲမှပြည်သူချစ်သောသတင်းသမားများမှာ မြောင်းထဲရောက်သွားကြပြီဟုနအဖသတင်းစာများမှာ မကြာမှီရေးသားကြပါတော့မည်။ ယင်းမှာကျွှန်တော်တို့ အတွက် အထူးဆုံးရှုံးမူကြီးတခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ဆုံးရှုံးမူမျိုးကို ဖန်တီးသူများမှာဒီဗွီဘီမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ ဝင်လူကြီးများဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့် ဤသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျွန်တော်တို့အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ ၏စီမံခန့် ခွဲမူ ညံဖျင်းမူများ၊ ရရှိထားနှင့်ပြီးသော ထောက်ပံကြေးများများကို ပို၍ရရှိအောင် မဆောင်၇ွက်နိုင်မူများ၊ မိမိတို့ ၏ ဒီဗွီဘီ အသံလွှင့်ဌါနကို ဖွင့်လှစ်စဉ်မှ ယခုအချိန်တွင် နာမည်ဆိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဆောင်၇ွက်ခြင်းမှာ အထူးသိက္ခာကျစရာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတရပ်လုံးအနေဖြင့် ဤမျှအောက်တန်းးကျလှသော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ဆောင်၇ွက်ချက်များကို လက်သင့်ခံစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါ။ ထို့ ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်မိမိတို့၏ အပြစ်အနာအဆာများကို ဖုံးကွယ်နိုင်ရန် အလှူငွေ မရသည်ကို အကြောင်းပြပြီးဝန်ထမ်းများအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းထက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ရာထူးများမှသာအမြန်ဆုံး နုတ်ထွက်ပေးရန် သင့်ပါသည်။သို့ ဖြစ်ပါ၍ ၀န်ထမ်းသုံးဦးအပေါ်ရန်သူစစ်အစိုးရအလိုကျ အလုပ်မှ ဖြုတ်လိုက်ခြင်းကို ဆောင်၇ွက်ခြင်းမှ အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဆောင်၇ွက်ပြီး ရာထူးများအား ပြန်လည် ပေးအပ်ရန်နှင့် သို့ မဟုတ်က လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံသမားတို့ ၏ စိတ်နေသဘောထားများနှင့်လုံးဝကိုက်ညီမူ မရှိသောကြောင့် ချက်ချင်း နုတ်ထွက်ပေးကြဖို့ သာလိုပါသည်။။။။
ခိုင်အောင်ကျော်( နယူးယောက် )
BY YeYint Nge ... 2/28/20112comment
7 attachments — Download all attachments
28 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2592K View Download
28 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2922K View Download
1444K View Download
chacnya seperative movement.pdf
38K View Download
1911K View Download
chacnya seperative movement.doc
66K View Download
100K View Download
28 Feb 2011 Yeyintnge's Diary
မြန်မာ့တော်လှန်ရေးနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ မြန်မာ့တော်လှန်ရေးနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၂၀၁၁ ခုနှစ်သည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် ထူးခြားသောနှစ်တနှစ် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်ကာလသည်လည်း နအဖ စစ်အုပ်စုက ကျင်းပသော ၂၀၁၀ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အဖြစ် စစ်အုပ်စုကြိုးဆွဲ ရုပ်သေးအစိုးရ ပေါ်ထွက် လာစေရန် လွှတ်တော်ခေါ်ယူနေဆဲ ကာလဖြစ်ပါသည်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် နအဖစစ်ဝါဒီစနစ်ကို ထောက်ခံအားပေး နေကြသည့် ပညာရှင်ဆိုသူများကလဲ ၂၀၁၁ သည် တော်လှန်ရေး အင်အားစုများအတွက် လမ်းဆုံးဖြစ်တော့မယောင် အ သံလွှင့်နေကြပါသည်။
လက်တွေ့တွင်ကား ၂၀၁၁ သည် တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအတွက် လမ်းဆုံတခုသာ ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် တရားဝင်တက်လာသည့် အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊ လက်နက်အင်အားသုံး၍ တရားမ၀င်တက်လာသည့် အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုဖြစ် ဖြစ် ပြည်သူ့အာဏာကို ဖယ်ရှား၍ မရပါ။ အာဏာသည် ပြည်သူ့ထံမှသာ သက်ဆင်းပါသည်။ သေနတ်ပြောင်းဝမှ ဆင်း သက်သည် မဟုတ်။ သေနတ်ချိန်၍ ကျင်းပသည့် အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲမှ ဆင်းသက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ ပြည်သူ့ အာဏာကို ပြည်သူဆီမှ ဆင်းသက်ရန် ကြိုးပမ်းသော တော်လှန်ရေးသမားများအတွက် လမ်းဆုံးဖြစ်လာမည် မဟုတ်။ လမ်းဆုံးဖြစ်လာမည် မဟုတ်သော်လဲ လမ်းဆုံမှသည် ပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင်ကား ရှေ့ဆက် ချီတက်ကြရပေမည်။
ယင်းသို့ ချီတက်ကြရာတွင် အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုအဆင့်များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ကြရန် လိုအပ်လှသည်ဖြစ်ရာ မြန်မာ့စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာများမှပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စည်းရုံးရေးနှင့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ထောက်ပံ့ရေးနှင့် သတင်းရယူရေး လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ကွန်ယက်ချိတ် ဆက် လှုပ်ရှားရေးနှင့် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်းတာဝန် စသည်များကို တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှု သော့ချက် ခြောက်ချက်ပေါ်တွင် အခြေပြု၍ ဤစာတမ်းအား ရေးသားပါသည်။
(၁) လူထုထောက်ခံမှု ရယူခြင်း
(၁.၁) ပြည်ပရောက် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း
ပြည်ပရောက် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လူဦးရေ သိန်းချီ ပါဝင်၍၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ဖြစ်တည်မှုသဏ္ဍာန်တွင် ဒေါင်လိုက် စုဖွဲ့မှုနှင့် အလျားလိုက် စုဖွဲ့မှု သဏ္ဍာန် နှစ်မျိုး ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒေါင်လိုက်စုဖွဲ့မှုတွင် လူမျိုးစုနှင့် ဘာသာရေး ကွဲပြား မှုများ ပါဝင်ပြီး၊ အလျားလိုက်စုဖွဲ့မှုတွင် လူတန်းစားအလွှာ ကွဲပြားမှုများ ပါဝင်သည်။
(၁) လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ကရင်အဖွဲ့၊ ချင်းအဖွဲ့၊ မွန်အဖွဲ့၊ ရှမ်းအဖွဲ့၊ ကချင်အဖွဲ့၊ ကယန်းအဖွဲ့၊ ရခိုင်အဖွဲ့ စ သည့် အစုအဖွဲ့များနှင့်
(၂) ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့၊ ခရစ်ယာန်အဖွဲ့၊ မွတ်စလင်အဖွဲ့ စသည့် အစုအဖွဲ့များသည် နယ်မြေဒေသနှင့် လူဦးရေပေါ်တွင် မူတည်၍ တည်ရှိနေပြီး၊ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဆက်သွယ်မှုများနှင့် လူမှုရေး၊ ဘာ သာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများ ရှိနေသည်။
(၁) နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ရရှိပြီး နိုင်ငံရေးရာတွင် စိတ်ပါဝင်စားသော အစုအဖွဲ့များ
(၂) နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရရှိပြီး နိုင်ငံရေးရာများတွင် ပါဝင်မှုမရှိသော အစုအဖွဲ့များ
(၃) ပြည်ပတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါ်မူတည်၍ အခြေစိုက် နေထိုင်သူများ ပါဝင်သော အစုအဖွဲ့များ
(၄) ကျောင်းသား အစုအဖွဲ့များ
စသည့် အစုအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ပါဝင်မှုများ ရှိနေသည်။
(၁.၂) လက်ရှိနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ၏ လက်ရှိနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများသည် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှု (Political activism) အ ကောင်အထည်ဖော်မှုများတွင် အခြေခံသည်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ရာပေါင်းများစွာမှာ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ပျံ့နှံ့နေပြီး၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအရေအတွက် ထောင်နှင့်ချီ၍ ရှိသည်။ ယင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှ နိုင်ငံအလိုက်၊ အဖွဲ့အစည်း အလိုက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင်
(၂) အထိမ်းအမှတ်နေ့များတွင် အခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ခြင်း
(၃) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရေးဌာနများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ကင်ပိန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
(၁.၃) လူထုထောက်ခံမှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်
လူထုထောက်ခံမှုအပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို တက်ကြွစွာ ပြုလုပ်နေသူများအား လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ တိုက်ရိုက် ထောက်ခံမှုနှင့် သွယ်ဝိုက်ထောက်ခံမှု အခြေအနေ နှစ်ပိုင်းရှိရာ တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုသဏ္ဍာန်ဖြစ်သော သတင်းအချက် အလက်များ ပေးပို့မှု၊ တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် ဆက်သွယ်မှု ကဏ္ဍများတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနေသကဲ့သို့၊ သွယ် ၀ိုက်ထောက်ခံမှု သဏ္ဍာန်ဖြစ်သော အာဏာရှင်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ငြင်းဆန်ခြင်းများတွင်လဲ အားနည်းချက်များ ရှိနေသည်။
အဓိက အားနည်းချက် အရှိဆုံးကဏ္ဍမှာ တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားမှ ကွင်းဆက်ပြတ်မှု များပင်ဖြစ် သည်။ တော်လှန်ရေးသမားများသည် လူထုနှင့် တသားတည်းမရှိပဲ မိမိကိုယ်ကို တော်လှန်ရေးသမား ဖြစ်ရခြင်းကို ဂုဏ် ဖော်ကြွားဝါနေခြင်း၊ လူထု၏အမြင်နှင့် တန်ဖိုးထားမှုများကို မဖော်ထုတ်ပဲ တော်လှန်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာခြင်း မရှိ သေးသူများကို စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ လူတဦးချင်းစီ၏ နိုင်ငံရေး ရေချိန်နှင့် အသိကို တိုင်း တာခြင်း မပြုပဲ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း အတွင်းသို့ ၀င်ရန် အတင်းအကြပ် သိမ်းသွင်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးများကို မဟာဗျူ ဟာ အစည်းအဝေး၊ လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍခွဲခြား ပြုလုပ်ခြင်း မရှိပဲ ရောနှောပြုလုပ် ခြင်းများကြောင့် မဟာဗျူဟာရေး၊ မူဝါဒရေးရာ အစည်းအဝေးများ၏ သဘောသဘာဝအရ ငြင်းခုံဝေဖန် ဆွေးနွေးမှုများ ဖြင့် လူသစ်များ၏ အတွေးအမြင်ကို ရှုပ်ထွေးစေခြင်း၊ အတွေ့အကြုံနှင့် ရာထူးအဆင့်အတန်းအပေါ် မာန်တက်၍ ပမာမ ခန့် ပြောဆိုပြုမူခြင်းများ ရှိနေခြင်း၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာ လူထုသို့ empowerment လုပ်ခြင်းဖြင့် လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း မရှိပဲ နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူများအကြားတွင်ပင် ပြန်၍ လည်ပတ်နေခြင်း စသည့် အားနည်းချက်များနှင့် လူထုနှင့် ကွင်း ဆက်ပြတ်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
မည်သည့် တော်လှန်ရေးမဆို လူထုနှင့် ကွင်းဆက်ပြတ်သည်နှင့် အောင်မြင်မှု နှောင့်နှေးမည်မှာ သေချာလှပေသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်နေသော လူထု၏ အင်အားကို ထည့်သွင်း မတွက်ချက်၍ မရပါ။ ပြည်ပတွင် အခြေစိုက်ထား သော သိန်းနှင့်ချီနေသည့် မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းသည် ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်နေသော သန်းနှင့် ချီသည့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့ အစည်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု ရှိနေသူများ ဖြစ်သည်။ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အတွေးအမြင်၊ သုံး သပ်ချက်နှင့် သဘောထားများသည် ပြည်တွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ တစုံတရာသော အတိုင်းအတာတခုအထိ သက်ရောက် မှု ရှိနိုင်ပေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပြည်ပရောက် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အင်အားကို တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံး ပြုနိုင်ပါက ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် တိုးတက်မှုများ ရရှိလာမည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်သည်။ သို့ဆို လျှင် ထောက်ခံမှုကို မည်သို့ ရယူမည်နည်း။
ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ့တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် အရည်အချင်းရှိသော မျိုးဆက်ဟောင်းခါင်းဆောင်များနှင့် မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်မှုရှိနေသည်။ ယင်းခေါင်းဆောင်များ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ အသိပညာ၊ အတတ် ပညာ များကို အသုံးပြုပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အများလက်ခံနိုင်မည့် ခေါင်းဆောင်များကို မွေးထုတ်ရန် လိုအပ်သည်။ လူ့ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းရှိ လူမျိုးစု အစုအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးအစုအဖွဲ့များ၊ လူထု လူတန်းစား အလွှာများသို့ ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ လူထုအား လှေကားချ စည်းရုံးရန် လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် အသာစီးယူ၍ သွားရောက်ဟောပြော ဆရာလုပ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ တသားတည်းဆက်ဆံရေး လုပ်နိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်များမှသာ ဤ နည်းလမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။ “မင်းဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ” လုပ်တတ်သည့် ခေါင်းဆောင်များမှ ဤတာဝန် ကို မယူသင့်ပါ။
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ပညာတတ် လူ့အလွှာတရပ် သီးခြားရပ်တည်နေလျက်ရှိကြသည်။ ယင်းတို့သည် လူအများနှင့် ရော နှောနေထိုင်ခြင်း မရှိပဲ မိမိတို့၏ ကျွမ်းကျင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များကို လက်တွေ့အသုံးချနေသူများ ဖြစ်သည်။ ပညာတတ်လူတန်းစားတို့၏ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အားနည်းချက် ဥာဉ်တခုမှာ တော်ရုံတန်ရုံနှင့် တဘက်သား ကို အထင်မကြီးတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ကျက်မှု မပြည့်သူဖြစ်ပါက တဘက်သားကို အ ထင်သေးတတ်သည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါ ပညာတတ်တို့သည် အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်၊ ရပ်တည်ချက် တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နှင့် တိတိကျကျ ပြောဆိုစည်းရုံးနိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရပါက အမှန်တရားကို ပညာဥာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး တော် လှန်ရေး၏ အမာခံအင်အားစုများ အထိ ဖြစ်လာတတ်ပေသည်။ ဘဏ္ဍာရေးအရ ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် တက်ကြွစွာထောက် ခံသူများလည်း ဖြစ်လာတတ်ပေသည်။ ယင်းတို့ကို စည်းရုံးမည့် ခေါင်းဆောင်များသည် အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့် တန် ဖိုးထားမှုကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်သူ ဖြစ် ရန် လိုအပ်သည်။ တဦးချင်းစီအလိုက်၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် တာဝန်များကို ခွဲဝေ ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ထိုသူများကို လူအင်အား များလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက် တခုတည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းသို့ သွတ်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ရှောင်ကြဉ် သင့်သည်။ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးပေါင်းများစွာကို တက်ဖူး၊ လုပ်ဖူးနေသူ တယောက်ကို အရေမရ၊ အ ဖတ်မရ ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြမည့် အစည်းအဝေးတခုသို့ ခေါ်သွားမိပါက တကြိမ်တည်းနှင့် လှည့်ပြေးသွားပေလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့၏ တော်လှန်ရေးအပေါ် အမြင်နှင့် နှုတ်ထွက်စကားတို့သည် လူအများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများစွာ ရှိနိုင် သည်ဖြစ်ရာ Esoteric appeals ကို လုပ်ငန်းစဉ်တရပ်အနေဖြင့် သီးခြား အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှာ လူထုထဲတွင် အမှန်တကယ် ခံစားနေရသော အခြေအနေကို ဖော်ထုတ်၍ လူထုနှင့် တော်လှန်ရေး နီး ကပ်လာစေရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်ရာ အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တရပ်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းတွင် ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစား လက်တဆုပ်စာမှ လွဲလျှင် လူအများစုမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး၏ စီးပွားရေး၊ ပညာ ရေး၊ လူမှုရေး ယုတ်လျော့မှုများကြောင့် ပြည်တွင်းတွင် မနေနိုင်ပဲ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာလာကြသူများ ဖြစ်သည်။ စိတ်ထဲ တွင် အာဏာရှင်စနစ်၏ ဆိုးကျိုးများကိုကား အနည်းနှင့်အများ သိနေကြပြီး ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုသူများသည် အ ဘယ်ကြောင့် တော်လှန်ရေးသမားများ၊ တော်လှန်ရေးကို ထောက်ခံသူများ မဖြစ်လာသေးသနည်း။ တော်လှန်ရေး သမား များ၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးနှင့် စည်းရုံးရေးယန္တရားများ အားနည်းနေမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့၊ တက်ကြွလွန်သူများ၏ အတင်း အကြပ် စည်းရုံးမှုများကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ စည်းရုံးရေးပထမ အဆင့်တွင် စနစ်၏ ဆိုးကျိုးများကို မီးမောင်းထိုးပြ ခြင်းများ ပြုလုပ်ရသည် ဖြစ်လေရာ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စနစ်၏ ဆိုးကျိုးများကို လူအများက သိရှိလက်ခံလာစေရေးကို ဦးတည် လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်။ ယင်းမှတဆင့် ထောက်ခံသူဖြစ်လာစေရန် ဒုတိယအဆင့် ကို တက်ရောက်စည်းရုံးရပေမည်။ ထောက်ခံသူမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဖြစ်လာစေရန်မူ စည်းကျော်နိုင်မည့် အခြေအနေ နှင့် အချိန်အခါကို ချိန်ကိုက်ဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
လူတယောက်အနေဖြင့် ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်နေသည့် အချိန်တခုတွင် ကြီးမားသော လူထုတိုက်ပွဲများ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ် ရှားမှုများကို မကြုံရပါက (သို့မဟုတ်) တော်လှန်ရေးမိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် မနီးစပ်သူ ဖြစ်ပါက ကောက်ခါငင်ခါ တော်လှန်ရေးသမား တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ချေ အလွန်ရှားပါးပါသည်။ လူထုလှုပ်ရှားမှု အခြေပြု ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်တွင် လူထုတိုက်ပွဲများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ဆောင်မှု လိုအပ်ချက်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားချက်မှာ အဆိုပါ လူထု တိုက်ပွဲများသည် အဆုံးသတ်အောင်ပွဲကို မဆောင်ကျဉ်းနိုင်စေကာမူ တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်များကို မွေးဖွားပေးနိုင်စေ၍
ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ စည်းကျော်ရမည့် အခြေအနေ၊ အခင်းအကျင်း မရှိသေး၍ ငြိမ်နေသူများကို ကြောက်ရွံ့သူများဟူ ၍ သုံးသပ်၊ စွပ်စွဲမှုများ မပြုမိစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောသဘာဝ၊ အမြင်နှင့် တန်ဖိုးများကို လေ့ လာပြီးမှသာ Exoteric appeals လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။
(၄) လှုပ်ရှားမှုများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
လူအများ ပြုလုပ်နိုင်မည့် လှုပ်ရှားမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုသဏ္ဍာန်များမှာ လဲ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိရန် လိုအပ်သည်။ လူတယောက်၏ လှုပ်ရှားနိုင်မှု အခြေအနေကို မကန့်သတ်ရ။ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ပြည်ပတော်လှန်ရေးသမားအများစုသည် မိမိက ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး တိုက်ပွဲ ခေါ်ခြင်းများကို အလွန်အားသန်ကြသည်။ ဖော်ဆောင်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှုတွင် လာရောက်ပူးပေါင်းရန်ကိုသာ လှုံ့ ဆော်ခြင်း၊ ဆွဲခေါ်ခြင်းများ လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ မိမိ၏ လှုပ်ရှားမှုကိုသာ ဗဟိုပြု စဉ်းစားလေ့ရှိရာ မပါဝင်လာသူများကို အပြစ်တင်လေ့ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် အောင်ပွဲ၏ အသက်သွေးကြောမှာ လူထုဖြစ်ရာ လူထုဗဟိုပြု စဉ်းစားမှုကိုလဲ သီး ခြား ပြုလုပ်သင့်ပေသည်။ ယင်းသို့ မလုပ်လျှင် လူထုနှင့် တော်လှန်ရေး ကွင်းဆက်ပြတ်၍ တော်လှန်ရေး ခါးဆက်ပြတ် မည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်ဖြစ်သည်။
ပြည်ပတွင် လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်နေသော လှုပ်ရှားမှုများတွင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် မပါဝင်နိုင်သူများကို မည်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပေးအပ်မည်နည်း။ ထိုသူတို့ ပါဝင်နိုင်သည့် မည်သို့သော လှုပ်ရှားမှုများကိုပါ တွဲဖက် အ ကောင်အထည်ဖော်မည်နည်း။ ယင်းအချက်မှာ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် လူအများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာ နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံကျသော မေးခွန်းများပင်ဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေးသမားများတွင် တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်သော အရည်အချင်းနှင့် အလားအလာများ ရှိသည် ကိုလည်း လူထုကို ပြသရန် လိုအပ်ပေသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် “အာဏာရှင်ကိုလဲ မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်လှန်ရေးသမားဆိုတဲ့ လူတွေကိုလဲ အယုံအကြည်မရှိဘူး” ဆိုသော အတွေးအခေါ်တရပ် ပြန့်နှံ့သွားမှုသည် တော် လှန်ရေးတရပ်အတွက် မည်မျှ အန္တရာယ်ကြီးမားသည်ကို တော်လှန်ရေးသမားတိုင်း သတိပြုရန် လိုအပ်သည်။ လူထုနှင့် တော်လှန်ရေး တသားတည်းဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် လူထုကြီးမှ တော်လှန်ရေးသမားများကို အကဲဖြတ် လေ့လာနေ သည်ကို စွဲမြဲစွာ မှတ်သားထားရန် လိုအပ်သည်။ မိမိ၏ အရည်အချင်းနှင့် အရည်အသွေးကို တောက်ပြောင်နေစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူအများအထင်လွဲစေမည့်၊ အထင်သေးစေမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း တို့ကို လူထုထောက်ခံမှု ရယူရေး နည်းလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် အီးမေးလ်နှင့် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ကြသည်။ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များ ကောင်းမွန်သည်။ ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆိုသော ဖုန်းများ၊ မြန်မာ ပြည်သို့ ပေးပို့သော အီးမေးလ်နှင့် စာများမှာ နေ့စဉ် ထောင်နှင့်ချီ၍ ရှိနိုင်သည်။
စီးပွားရေး အခြေအနေမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှ သိန်းနှင့်ချီသော လူဦးရေ၏ စားဝတ်နေရေးကို ထောက်ပံ့ပေးနေသော အလုပ်သမားအင်အားစု တခုအဖြစ် ယူဆ၍ ရ သည်။ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်မည့် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် များစွာလည်း ပါဝင်သည်။ မြန်မာ့ပညာရေး အဆင့်မြင့်မြင့် ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးကို ပေါင်းကူးပေးမည့် ကျောင်းသားအင်အားစုများလဲ ပါဝင်သည်။ ဤ အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသား အင်အားစုကြီးသည် တည်ငြိမ်နေသော အင်အားစုကြီး မဟုတ်။ ရွေ့လျားနေသော အင်အားစုကြီးဖြစ်သည်။ အ၀င်အထွက်၊ အသွားအပြန်များ ရှိနေသည်။
တော်လှန်ရေးတခု၏ အရေးကြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြစ်သော မြေအောက်လှုပ်ရှား ချိတ်ဆက်ရေး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် သတင်းဖြန့်ဖြူးရေး၊ ထောက်ပံ့ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ တည်ဆောက်စည်းရုံးရေး၊ ဆက်သားတာဝန် စသည်များကို ဤအင်အားစုကြီးပေါ်တွင် မူတည်ဖော်ဆောင်နိုင်သည့် အခြေအနေများ ရှိသည်။
(၃.၁) လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ အခြေအနေ
ပြည်ပမှ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု စစ်မျက်နှာတွင် အဖွဲ့အစည်း ရာပေါင်းများစွာ ပါဝင်နေသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ သည် နိုင်ငံအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသော တပ်ပေါင်းစုများတွင် ထပ်မံ ပါဝင်နေကြပြီး၊ တကမ္ဘာလုံးကို ကိုယ်စားပြုချိတ်ဆက် နေသော ကွန်ယက် အဖွဲ့များနှင့် ဖိုရမ်အဖွဲ့များလည်း ရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပင်မလှုပ်ရှားမှုများမှာ ဆန္ဒပြပွဲများ ပြု လုပ်ခြင်း၊ အခမ်းအနားများ ကျင်းပခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအစိုးရများအား ကင်ပိန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
များပြားလှသော အဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အားပြိုင်မှုများ ရှိနေသည်။ တပ်ပေါင်းစု ချိတ်ဆက်ကွန် ယက်လှုပ်ရှားမှုပေါ်တွင် အခြေမခံပဲ အဖွဲ့များ ပေါင်းစည်းလိုက်၊ တဖွဲ့ထပ်ပေါ်လာလိုက်၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး သက် ၀င်လှုပ်ရှားမှုများ လျော့နည်းလိုက်၊ ခေါင်းဆောင်နေရာနှင့် တာဝန်ယူမှုပေါ် မူတည်၍ သဘောထား ကွဲလဲပြီး ပြိုကွဲလိုက်၊ အသစ်ပေါ်လာလိုက် စသည်များဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ သံသရာ လည်နေသည်။
အဖွဲ့အစည်းရေးရာကဏ္ဍတွင် scope နှင့် structure နှစ်မျိုးရှိရာ structure ထဲတွင် ပါဝင်မည့် ခေါင်းဆောင်နေရာများကို ဦးစားပေးမှု လွန်ကဲသွားခြင်းကြောင့်၊ scope တွင် အားနည်းသွားသည်။ လူအများ စုပေါင်းပြုလုပ်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာ သည့် synergy ကို ထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိ ဖြစ်လာသည်။ တည်ဆောက်စည်းရုံးရေးနှင့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများကို အ ကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခြင်းကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကင်းကွာလာသည်။ လူတဦးတယောက်က “နိုင်ငံရေး လုပ်ချင် တယ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲ” ဟု မေးလာချိန်တွင် ဆန္ဒပြပွဲနှင့် အခမ်းအနားများ လာခိုင်းရုံမှ လွဲ၍ ဘာတာဝန်ပေးရမည် မသိ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။
အဖွဲ့အစည်းအများစုတွင် လက်ဆင့်ကမ်း ပညာပေးမှု မရှိသလောက် နည်းပါးသည်။ မျိုးဆက်ဟောင်းနှင့် မျိုးဆက်သစ် များ အကြား ပေါင်းကူးတံတားများ မရှိ။ လက်ဆင့်ကမ်းခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ကို နေရာလုမှုဟု တလွဲတွေးထင်နေသူများ ရှိသည်။ တော်လှန်ရေး၏ လည်ပတ်မှု ယန္တရားကို အသက်ဆက်စေမည့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးနှင့် ကေဒါကောင်းတ ယောက် ဖြစ်စေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရေး စီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မှု အလွန်နည်းသည်။ ဆွေးနွေးလိုက်၊ ဆုံး ဖြတ်လိုက်၊ ပြန်ဆွေးနွေးလိုက်၊ ဆုံးဖြတ်လိုက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်သို့ လုံးဝမတက်တော့သည့် မူများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ပါဝင်လာသူများ၏ တဦးချင်း ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး မည်သို့သော လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် သင့်လျော်မည်ကို ခေါင်းဆောင်များ မှ ဆုံးဖြတ် တာဝန်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လူနှင့် တာဝန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။
စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနှင့် အလှည့်ကျခေါင်းဆောင်မှုစနစ်များ ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှု မရှိသော ခေါင်းဆောင်မှုကို အစားထိုးနိုင်သည်။ ရာထူးနှင့် တာဝန်ယူမှုကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ဝေဖန်ချက် ပြုခြင်း၊ စီမံချက်များ၏ ထိရောက်မှုကို ပြန် လည်ဆန်းစစ်ခြင်း တို့ဖြင့် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု လုပ်နိုင်သည်။
အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ယခင်အစည်းအဝေးများက ချမှတ်ခဲ့သော ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို မည်မျှအထိ အကောင်အ ထည်ဖော် ပြီးစီးခဲ့သနည်း၊ မည်သူက တာဝန်ယူခဲ့ပြီး မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ တာဝန်ယူပြီးမြောက်ခဲ့သနည်း ဆိုသည် ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး မှသာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်ချမှတ်သင့်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တခု ချမှတ်ပြီးပါက အလုပ် အဖွဲ့တခုကို ထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တွဲဖက်၍ ချမှတ်သင့်သည်။ ထိုအလုပ်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်၍ တိုးတက်မှုမရှိပါက အစားထိုးသင့်သည်။
နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးများကို အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများနှင့် လေ့လာဆွေးနွေးရေး အစည်းအဝေးများ အနေဖြင့် သီး ခြားခွဲကျင်းပသင့်သည်။ နိုင်ငံရေး ရေချိန် မတူသည့်လူများကို လုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ရေး အစည်းအဝေးများသို့ ခေါ်ဆောင် သွားပါက အစည်းအဝေးများတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ခြင်း၊ အရေမရ အဖတ်မရ ငြင်းခုံနေရခြင်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန် လိမ့်မည်ဖြစ်ရာ မည်သည့်နေ့တွင်၊ မည်မျှ လူအင်အားဖြင့် မည်သို့သော အစည်းအဝေးကို လုပ်လိုက်သည်ဟူ၍ မီဒီယာ များပေါ်တွင် ကြွားဝါရန် မဟုတ်ပဲ ထိရောက်စွာ အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်မျာ ချမှတ်ရ သော အစည်းအဝေးဖြစ်ပါက သီးခြားခွဲ ကျင်းပသင့်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံရေးသင်တန်းများ၊ ခေါင်းဆောင်သင်တန်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းများနှင့် capacity building သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ တော်လှန်ရေး ခါးဆက်မပြတ်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။
ပြည်ပ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ကွင်းဆက်ပြတ်မှု သဏ္ဍာန်သုံးမျိုး ဖြစ်ပွားတတ်သည်။
(၁) ခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အကြားမှ ကွင်းဆက်ပြတ်မှု
ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အကြားမှ ကွင်းဆက်ပြတ်မှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြတ်တောင်းပြတ် တောင်း လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သို့ ကျဆင်းသွားစေနိုင်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုသည်မှာ အခမ်းအနားများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ ရှိမှ ခေါင်းဆောင်ရောက် လာခြင်းကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ အတူတကွ နီးနီးစပ်စပ် နေထိုင်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ရုံး ခန်း တခန်းတွင် ထိုင်နေပြီး တကမ္ဘာလုံးမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နေသည့် စီးပွားရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ကွန်ပျူတာတလုံးရှေ့တွင် ထိုင်နေပြီး မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေသော နေရာမှ ဖြစ်ရပ်များကို အပ်ကျတာကအစ သိရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးနေရသော နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များ ယနေ့ကမ္ဘာတွင် များစွာရှိသည်။ အရေးကြီးသည်က ဆက် သွယ်ရေး စနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တယောက်၏ ဆက်သွယ်မှုတွင် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက် အရေးကြီးမှုပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လိုအပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ခေါင်းဆောင်များမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေး ကြရမည်ဖြစ်သည်။
(၂) တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြားမှ ကွင်းဆက်ပြတ်မှု
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ အကြားတွင် ကွင်းဆက်ပြတ်လျှင် လှုပ်ရှားမှုများ ဟန်ချက် မညီပဲ ဖြစ်တတ်သည်။ ယင်း ထက် ပိုဆိုးပါက လှုပ်ရှားမှုများ ထပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုအတွက် အရေးပါသော ငွေအင်အား၊ လူအင်အားများကို အလဟဿ ဖြုန်းပစ်လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ရေတွင်းတူးရာတွင် မည်မျှပင် အားစိုက်စိုက်၊ ရေကြောမရှိသည့် နေ ရာတွင်သာ ထပ်တလဲလဲ ၀ိုင်းတူးနေပါက တွင်းကြီးသာ ပိုနက်သွားမည်။ ရေတော့ ထွက်လာမည် မဟုတ်။ ကွင်းဆက် ပြတ်မှု မရှိမှသာ ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှု ပြုနိုင်ပြီး၊ အင်အားကို စနစ်တကျ သုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၃) တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြားမှ ကွင်းဆက်ပြတ်မှု
ဤသည်မှာ တော်လှန်ရေးကို ရှေ့တိုးမရအောင် နိုင်ငံရေး အကျပ်ဆိုက်မှု ဖြစ်စေနိုင်သော အဓိက အချက်ဖြစ်သည်။ အ လွန်အရေးကြီးရုံမက အန္တရာယ် အလွန်ကြီးမားသည့် ကွင်းဆက်ပြတ်မှု ပြဿနာဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တပ်ပေါင်းစု၊ သက်ဆိုင်ရာ ဖိုရမ်များ အလိုက် ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆက်သွယ် ရေးစနစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍၊ ကွက်လပ်များ ရှိပါက ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင် ကွင်းဆက်မပြတ်စေရန် တပ်ပေါင်းစုသဏ္ဍာန် ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် စုပေါင်းခေါင်းဆောင် မှု လိုအပ်သည်။ တပ်ပေါင်းစုတွင် စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု သဏ္ဍာန်မပါလျှင် အလုပ်များ ရှေ့ဆက်မတိုးပဲ ခေါင်းဆောင် စောင့်ခြင်း၊ မျှော်ခြင်းများဖြင့် အချိန်ကုန်မည် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရေး ဆိုသည်ကို အကြိမ်များ စွာ ရေရွတ်ပြီး၊ ထိုလူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရေးကို တွန်းအားပေးရန် အနီးတွင် ရှိနေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း အင်အားကို မေ့မကျန်ခဲ့စေရန် သတိပြုသင့်သည်။ ထို လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အင်အားသည် ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှုများကို တစုံတရာ သက် ရောက်မှုရှိနေသော အင်အားဖြစ်ကြောင်းကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်ရန် လိုအပ်သည်။
ပြည်ပထောက်ခံမှုဆိုရာတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံမှု (Moral Support) ၊ နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှု (Political Support)၊ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းထောက်ပံ့မှု (Material Support) နဲ့ နယ်မြေဒေသ၊ အခြေစိုက် စခန်း ပံ့ပိုးပေးမှု (Sanctuary Support) များ ပါဝင်သည်ဖြစ်ရာ မိမိတို့ လုပ်နေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများက မည်သည့် ထောက်ခံမှုကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေ သနည်း ဆိုသည်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်သည်။ Moral support ဆိုရာတွင် နိုင်ငံခြားအစိုးရ(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ တော်လှန်ရေးကို ထောက်ခံမှုအား စတိတ်မင့်များနှင့် ကြေငြာချက်များ တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း ဖြစ်သည်။
Political support ဆိုရာတွင် နိုင်ငံရပ်ခြား အစိုးရများမှ တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ၏ နိုင်ငံတကာ ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မှီလာအောင် အကူအညီ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Material support ဆိုရာတွင် တော်လှန်ရေးအတွက် ငွေကြေး၊ လက် နက်ပစ္စည်းနဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုတွေကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းကို ဆိုလိုပြီး၊ Sanctuaries ဆိုသည်မှာ တော်လှန်ရေးသမား များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေး၊ လက်နက်များ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရေး၊ အော်ပရေးရှင်းများ စီမံရေးဆွဲရေးနဲ့ ခေတ္တဆုတ်ခွာလာနိုင်မှုများအတွက် လိုအပ်သည့် နယ်မြေဒေသ ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုမှ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနီးပါးသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အစိုးရများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ထောက်ခံမှုများ ရရှိစေရန် တစိုက်မတ်မတ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတို့မှ ၄င်းတို့၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒများနှင့်အညီ ထောက်ခံနိုင် မှု မည်မျှအဆင့်အထိရှိသည်၊ မည်မျှအဆင့်အထိ ထောက်ခံပေးထားပြီဆိုသည်ကို သုံးသပ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုသည်။ ၅၀ သာ တတ်နိုင်သူထံမှ ၁၀၀ တိုးတောင်းလဲ ထူးမည် မဟုတ်။ တောင်းဆိုနေရင်း အချိန်သာ ကုန်သွားမည်။ ၅၀ တတ်နိုင်ပြီး ၁၀ ပဲ ထုတ်ပေးထားလျှင်ကား တောင်းဆိုခြင်းသည် အကျိုးရှိနိုင်ပေသည်။ ထုတ်ပေးနိုင်သမျှ အကုန်ထုတ်ပေးထားပြီး၊ မုန့် သွားဝယ်စားခိုင်းသည်ကို မုန့်စားဖို့ အားမထုတ်ပဲ ၁၀၀ ရအောင် တောင်းနေလျှင်တော့ မပေးနိုင်သည့်သူက စိတ်ရှုပ်လာ ပြီး ပေးထားသော ၅၀ ကိုပါ ပြန်သိမ်းသွားသည့် အခြေအနေဆိုက်လိမ့်မည်။
(၆) အာဏာရှင်တို့၏ ခြေလှမ်းများ
စစ်ပွဲတခုတွင် တိုက်စစ်ကိုသာ အာရုံစိုက်ပါက အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ ရန်သူ့ ခြေလှမ်းများ မိမိတို့ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေများအတွင်းသို့ မည်မျှအထိ ၀င်ရောက်နေသည်ကို သတိပြုကြည့်မိရန် လိုအပ်သည်။ လူအများက ရန်သူ့သတင်း ပေးများကို ကြောက်လေ့ရှိကြသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုသဏ္ဍာန်တွင်မူ မြေအောက် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေ သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် လူများမှ အပ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် လှုပ်ရှားမှုများမှာ လူအများ မသိ မှာစိုး၍ မီဒီယာများ၊ အင်တာနက်များပေါ်သို့ ဓာတ်ပုံများ၊ သတင်းများ တွန်းတင်နေရသည့် အခြေအနေဖြစ်နေသည်။ ဆန္ဒပြပွဲ အချိန်၊ နေရာဆိုသည်ကလဲ မည်သည့်နေ့ရက်တွင် မည်သည့် အချိန်မျိုး၌ မည်သည့်နေရာမျိုးတွင် ဆန္ဒပြပွဲရှိနိုင် သည်ကို မသိသိအောင် ကြေငြာနေကြရသည်။ အခမ်းအနား ဆိုသည်မှာလဲ ထိုနည်း၎င်း။ ဓာတ်ပုံများ အင်တာနက်ပေါ် မပါလာခြင်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုသတင်းများ မီဒီယာများပေါ်တွင် မပါလာခြင်းများကိုပင် ပြန်စိုးရိမ်ကြရမည့် နိုင်ငံရေးအသွင် သဏ္ဍာန်မှာ ရှိနေသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ရန်သူ့သတင်းပေးများ၏ အန္တရာယ်ကား သိပ်မကြီးလှ။ အမှန်တကယ် အန္တရာယ်ကြီးသည်က တော်လှန်ရေး၏ အောင်မြင်ရေး သော့ချက်တခုဖြစ်သော နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှုကို ပုံပြောင်းသွားစေရန် ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ် သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ တော်လှန်ရေးအပေါ် အမြင်မှားများ ဖြစ်လာစေရန် ဖော်ဆောင်သည့် ကြိုးပမ်းမှုများ ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးတွင် ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမ တမျိုးမှာ အားနည်းချက်များကို ထောက်ပြဝေဖန်၍ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို မည်သို့ တိုးတက်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို အကြံပေးသူများ ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယ တမျိုးများ အားနည်းချက် များကို ရှုံ့ချဝေဖန်၍ “အာဏာရှင်လဲ မကောင်း၊ တော်လှန်ရေးသမားများလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း” ဆိုသော အမြင်မှား ကို ဖြန့်ဝေသူများဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များမှ ဤလူနှစ်မျိုးကို ကွဲကွဲပြားပြား မြင်တတ်ဖို့ လိုသည်။ အပြု လားမသိ၊ အဖျက်လား မကွဲပြားလျှင် တုန့်ပြန်မှုများ မှားတတ်သည်။ မလိုလားအပ်သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဖြစ်သွားတတ်သည်။ သတိပြုရန် လိုအပ်သည်။
မည်သို့ဆိုစေ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာတွင် ဤစိန်ခေါ်မှု နှစ်ရပ်မှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးပါသည်။ တိုက်ပွဲချိန်ခွင်လျှာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရန်သူ့လူများမှ နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် အဖွဲ့အစည်း ကို ချဉ်းကပ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို သက်ဆိုးရှည်စေမည့် အယူအဆများအား လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ ဖြန့်ဖြူး ခြင်းများကို သတိပြုလေ့လာစောင့်ကြည့်ကြရန်နှင့် ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လှပေသည်။ လူနှင့် စနစ်ကို ခွဲခြား ပြီး စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်သင့်ပြီဖြစ်သည်။
ယခု တင်ပြထားသော အကြောင်းအရာများတွင် ရေတိုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပါဝင်သကဲ့သို့ ရေရှည် လုပ်ငန်းဆောင် တာများလဲ ပါဝင်ပါသည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းသဏ္ဍာန်၊ တည်နေရာအနေအထား၊ နိုင်ငံတကာထောက် ခံမှု ရရှိနိုင်မှု အခွင့်အလမ်း စသည်များသည် ၂၀၁၀ အလွန်ကာလ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများအတွက် အ တိုင်းအတာ တခုအထိ အရေးကြီးပါသည်။ ရေရှည်လုပ်ငန်းများကိုပဲ ဖိနေစဉ် ရေတိုတွင် ပေါ်လာသော အခွင့်အလမ်း များကို မဆုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ခြင်း၊ ရေတိုအိပ်မက်များဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်မှုများ မပြည့်ဝသော အခါ ရေရှည်တည်ဆောက်ပြင်ဆင်မှုများ မရှိထားခဲ့သောကြောင့် ခါးဆက်ပြတ်သွားခြင်း စသည့် အစွန်း နှစ်ဘက်ကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ရန် ရေတိုလုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်များ တပြိုင်တည်း ချမှတ်ဖော်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက် ရပါသည်။
ကဒါဖီ ကို လုံခြုံရေး ကောင်စီ အရေးယူပြီ
Latest ဇ၀ီယာ နှင့် မူဆာရာ မြို့ များကျ ၊ ထရီပိုလီ မြို့ ၏ မိုင် ၃၀ အကွာ ကို အတိုက် အခံ နှင့် နယ်တပ်များ ရောက်ရှိ
FNG၊ ၊လစ်ဗျား နိုင် ငံ အား ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ မှ အရေးယူပိတ် ဆို့မှု များ ထပ်မံ ပြုလုပ်ရန် ယနေ့၁၅ နိုင်ငံ ပါဝင်သည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ ကန့် ကွက် မဲ မရှိ ဆုံးဖြတ် ချက်ချသည်။ကုလ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှ ချမှတ်သည့် အရေးယူ ပိတ် ဆို့ မှု များ တွင် လစ်ဗျား အာဏာရှင်ကဒါဖီ နှင့် မိသားစုများ အပါအ၀င် လစ်ဗျား အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်များ ခရီးသွားလာ ခွင့် ၊လက်နက်ရောင်းချမှု ထိန်းချုပ် ခွင့် နှင့် ၎င်း တို့ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကို ပါထိန်းချုပ် သည့် ဥပဒေများ ပါရှိသည်။ယခု လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ကို ဝေဖန် သူ အဖြစ် အတိုက်ခံ ဘက်ကို ပြောင်းလဲထောက်ခံခဲ့တဲ့ ယခင် လစ်ဗျား နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလ သမဂ္ဂကြီး အဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူအီဘရဟာင် ဒမ်ဘာရှိ ကတော့ “ဒါဟာ ပြည်သူတွေ ကို စိတ်ဓာတ် ရေး ရာ အရအထောက်အပံ့ ဖြစ်စေတယ်” ဟု ဆိုသည်။လစ်ဗျား နိုင်ငံ ထရီပိုလီ မြို့ တွင် အခြေစိုက်၍ ဆန္ဒပြသူများကို ချေမှုန်း နေသည့် လစ်ဗျား
လစ်ဗျား နိုင်ငံတွင် အတိုက် အခံ တို့သိမ်းပိုက်ထားသည့် မြို့ များ ကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ က လစ်ဗျား တွင် သုံးသည့်အလံဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ ဂရပ်ဖစ်(အလ်ဂျာဇီးယား)
ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီသည် ထရီပိုလီ မြို့ ၏ အရှေ့ဘက် မိုင် မိုင် ၃၀ လောက်တွင် ရှိသည့်ဇ၀ီယာ မြို့ တွင် သူ့ငှားထားသည့် ကြေးစား တပ်များ ဖြင့် ချေမှုန်း လျက် ရှိသည်။အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘာမား က လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ နိုင်ငံမှ ထွက် ခွာပေးရန်တိုက်တွန်းထားသည်။လစ်ဗျား နိုင်ငံ တွင် အတိုက် အခံများ က ဒုတိယ အကြီး ဆုံး မြို့ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံ ၏ နေရာအတော်များများ ကို သိမ်းပိုက် ထားပြီး ဖြစ်သည်။လုံခြုံရေး ကောင် စီ ၏ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ မှု တွင် လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ၏ သားသမီး ငါးဦး၊သူ၏ထိပ်တန်း အဖွဲ့ ဝင် ၁၀ ဦး တို့ ပါဝင်ကာ ထိုသူများ ကို လူသား မျိုး နွယ် အား မျိုးဖြုတ် သတ်ဖြတ်မှုအတွက် နိုင်ငံ တကာ စစ်ခုံရုံး တွင် ပါ တင် နိုင် ရန် ကြိုးစား နေလျှက် ရှိသည်။လစ်ဗျား နိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံရေး မတည် ငြိမ်မှု များကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင် ရေ နံဈေးနှုန်းများ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက် လျှက်ရှိသည်။လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ သည် နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက် လုပ်ငန်း များ ကို ဗွေ ဆော် ဦးလုပ်ပြီး အစိုးရကိုယ်တိုင် အကြမ်းဖက်မှု အားပေးသည့် ကမ္ဘာ့ ပထမ ဦးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။လုံခြုံရေးကောင်စီ သည် လူမျိုး တုံး သတ်ဖြတ် မှု များ အတွက် လည်း ကဒါဖီ ကို အပြစ်ပေးရန်စီစဉ် နေသည် ။
ကဒါဖီ က ယမန် နေ့ က ပြောကြားသည့် မိန့် ခွန်း တွင် လူထူ ဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာများ သည်လူထု ကိုလိမ်ညာ သည် ဟု ဆိုခဲ့သည်။
Freedom News Group ကိုင်ရို News Room မှ သတင်းများ နှင့် The Huffington Postအွန်လိုင်း သတင်း စာ မှသတင်းများ ကို အခြေခံ ကာ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန် လေယာဉ် တင် သင်္ဘော အုပ်စု မြေထဲ ပင်လယ်သို့ ထွက်ခွာ
Say All Dictators to message of : Enough is Enough
LATEST ကဒါဖီ ၏ သစ္စာခံတပ် များ ပြည်သူ ဘက် သို့ ပြောင်းပြီ
လစ်ဗျား နိုင်ငံ မြို့ တော် ထရီပို ၏ အရှေ့ ဘက် မိုင် ၂၀ ခန့် အကွာ မှာ မြို့ စောင့် တပ် တစ်ခု ကို ရေနံတွင်းစောင့်တပ်(နယ်တပ်) များ နှင့် ပြည်သူများက ယနေ့ စီးနင်းထားစဉ် Photo : Aljazerra
ဂျက်ဖရီ၊ ၊ခောတ်မှီ လက်နက် တွေ တပ်ဆင်ထားပြီး စစ်သား ဦးရေ ခြောက်သိန်း ကျော်ရှိကာကဒါဖီကငှားရမ်း ထားသည့် ကြေးစားတပ်အင်အား ငါးသောင်းကျော် ရှိသည့် လစ်ဗျားအာဏာရှင်ကို အံတုနေ သည့် လစ်ဗျား ပြည်သူများ ကို ကူညီရန် အလို့ ငှာ အမေရိကန် ရေတပ်မတော်လက်အောက် ခံ လေတပ် နှင့် အခြားတပ်ရင်း တပ် ဖွဲ့ များသည် ၎င်း သို့ စခန်းချရာ နေရာတစ်ခု မှမြေထဲ ပင်လယ်ရှိ လစ်ဗျား နိုင်ငံ ရေနက် ဆိပ်ကမ်း နေရာ သို့ ခုတ် မောင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ထိုစစ်ရေယာဉ် အုပ်စု တွင် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ် ယာဉ် ၁၄ စီး နှင့် တိုက်လေယာဉ် ၁၀ စီးပါဝင်သည်။
လစ်ဗျား နိုင်ငံ တွင် အာဏာရှင် ဘက်မှ ပါဝင် တိုက်ခိုက် နေသည့် ကြေးစားစစ်သား များ ကိုလည်း ထွက် ခွာသွားရန် အမေရိကန် နိုင်ငံခြား ရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် က ပြောကြားထားသည်။ယခုထွက်ခွာသွား သည့် စစ်သင်္ဘော အုပ် စု သည် ယခု သီတင်း တစ်ပတ် အတွင်းပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ် မှ ရေး ဆွဲ လိုက်သည့်စစ်ရေး စီမံ ချက် တစ်ခု အောက် မှ လှုပ်ရှား အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ သည် ၁၉၆၉ ခု နှစ် နိုင်ငံအာဏာကို သိမ်းပိုက် ပြီးချိန် မှ စ၍အတိုက်အခံ များကို ရက်ရက် စက်စက် နှိပ် ကွပ်ကာ ၎င်း ၏ အာဏာစက် ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။
ကဒါဖီ သည် အာဏာရှင် နိုင်ငံ များ အနက် အတောင့်တင်းဆုံး နှင့် တိုက်စွမ်း ရည် အကောင်းဆုံးသောစစ်တပ် ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ ဖြစ်သည်။
ဖေဖ်ာဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့လစ်ဗျား တော်လှန်ရေး စတင် ချိန်မှ ယခု အချိန် ထိ လစ်ဗျားပြည်သူ အနည်း ဆုံး၁၀၀၀ ကျော်ခန့် ကို ကဒါဖီ က သတ် ဖြတ် ပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုများ ပြတ်တောက်သွားပါက ဂူဂဲလ် က မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုရမည် ကို သတင်းထုတ်ပြန်မည်
ဂူဂဲလ် ဂြိုလ် တု မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ ဝေဟင် ပိုင် နက် အထက် တွင် ရောက်ရှိ
နေပြည်တော် ရှိ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာ နကို ဂူဂဲလ် ဂြိုလ် တု မှ ရိုက်ကူးထားသည် ကိုဤသို့ တွေ့ ရသည်။
ဂျက်ဖရီ၊ ၊မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ပြည်သူ လူထု ၏ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လွတ်လပ်မှု အတွက်လူထု အုံကြွမှုများဖြစ်လာပါက အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု များ ပြတ်လပ် မှု မရှိရန်အတွက် အမေရိကန်အခြေစိုက်ဂူဂဲလ် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ မှာ ဂြိုလ် တုတစ်လုံးသည် အင်ဒို နီး ရှားနိုင်ငံ၏ကောင်းကင်ယံ မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ တောင်ဘက် သို့ ရွှေ့ ထားပြီး ဖြစ်သည် ဟု FNG မှ သတင်းရရှိသည်။မြန်မာ စစ်အစိုးရ က ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တာဘာလ ရွှေဝါရောက် တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း က လို အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု များ ဖြတ်တောက် ခဲ့ပါက တွစ်တာ လူမှု မီဒီယာသို တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ် နိုင်သည့် နည်း လမ်း တစ်ခု နှင့် IP Proxies များဖြင့် မြန်နှုန်း သိပ်မမြင့် သောအင်တာနက် ကို ကြည့် ရှု နိုင်ရန် စီစဉ် ထားသည် ဟု သိရသည်။
ဂူဂဲလ် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီ သည် လတ်တလောတွင် လူထု အုံကြွမှု ဖြစ်ရာ ဉ် အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခံထားရသည့် လစ်ဗျား နိုင်ငံ ကို ကူညီထားသည်။အီဂျစ် နိုင်ငံတွင် လူထု အုံကြွမှု များ အတွင်းဆန္ဒပြသူများ ကို ကူညီပေး ခဲ့သည့် ကိုင်ရိုမြို့ ကောင်း ကင်ယံ မှ ဂြိုလ် တု ကို ထရီပိုလီ မြို့ ပေါ်သို့ ရွှေ့ယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။လစ်ဗျား နိုင်ငံ အရှေ့ ဘက်ခြမ်း ရှိ ဘန်ဂါဇီ မြို့ မှာ တွင် ကဒါဖီ က အင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်သော် လည်း ဂူဂဲလ် ဂြိုလ်တု က အလျှင် အမြန် ကူညီ နိုင် ၍ ကဒါဖီလက်အောက်မှာ ဘန်ဂါ ဇီ မြို့ မှာ စောစီးစွာ လွတ်မြောက် ခဲ့သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုများ ပြတ်တောက်သွားပါက ဂူဂဲလ် ကမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည် ကို သတင်းထုတ်ပြန်မည် ဖြစ်သည်။
ယခင် က မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ အကာသ တွင် ဂူဂဲလ် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူး ရေး ဂြိုလ် တုများရောက်ရှိ ခဲ့ဖူးပြီး ၊ ယခု ဂြိုလ် တု သည် ဂူဂဲလ် ၏ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ဂြိုလ်တု ဖြစ်သည်။
သင်လည်း ဤ ကဲ့ သို့ Just Do It လုပ်နိုင်သည်
by Just Do It against Military Dictatorship on Monday, February 28, 2011 at 3:26am
ရဟန်း ရှင် လူ မိဘ ပြည်သူ တပ်မတော် သား များ နှင့် လူငယ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ ခင်ဗျား
မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ စစ်အာဏာရှင် သန်းရွှေ နှင့် ၎င်း တို့ ၏ လက်တစ်ဆုပ် စာ အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်
စု အား ဖယ်ရှား နိုင် ရန် အတွက် ယခု အချိန် သည် အချိန် ကောင်း အခါကောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း နေထိုင် သူ အပေါင်း တို စစ်အာဏာရှင် လက်အောက် မှ ရုန်းထွက် ရန် ပြင်ဆင်ကြ။
ယခု အချိန် ထက် ပို ကောင်းသော အချိန် မရှိ၊ အာဏာရှင် လက်အောက် မှ ပြည်သူများ အာဏာရှင် ကို
ဖယ်ရှား နိုင်ခဲ့တာ ကျုပ်တို့ ပြည်သူများ မျက် မြင့်တွေ့ ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အာဏာရှင် ကို ဖယ်ရှားနိုင်ရန် ယခု ပင် ချက်ခြင်းစကြလော့။
အာဏာရှင် ကို ဖယ်ရှား ရန် အတွက် JUST DO IT လှုပ်ရှားမှု တွင် သင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပါ။ JUST DO IT
သည် သင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။
ပထမ ခြေလှမ်း အနေ ဖြင့် “JUST DO IT ” ဟု ရေးပြီး သင်ကိုယ်တိုင် တစ်နေရာရာတွင် ကပ်ထား
နိုင်သည်။ သင့် သူ့ ငယ်ချင်း တစ်ယောက် ကို လည်း အီမေး ပို့ နိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်ရေး ထားသော စာ
အား သင့်မိတ်ဆွေ ကို ပေး နိုင် သည် ။သင်၏ Facebook စာမျက် နှာ တွင် ရေးသားထား နိုင်သည်။
အာဏာရှင် ကို ဖယ်ရှား ရန် ယခု ပင် ချက် ခြင်း စတင် ကြလော့။
စစ်အာရှင် စနစ် ကို ဖယ်ရှား နိုင်ရန် ဤနေရာတွင် သင်ပါဝင်ပါ။
နေပြည်တော် ဒုက္ခသီရိ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ကဒါဖီ ရမည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၁
(illustrated by Saw Ngo)
"---ဟောဒီ ဒုက္ခသီရိမြို့မှာ ငါ ဂုဏ်ပြုချင်တဲ့သူတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ လမ်းတွေချည်းပဲကွ---"
၁၅ မိနစ် လွှတ်တော်ကြီးကို အနားမကပ်နိုင်သေးသဖြင့် နေပြည်တော်ရောက် ကျွန်ုပ် ရန်လိုကျွဲ သတင်းတပုဒ်မှ မရေးရသေး။ ထို့ကြောင့် ချိုကုပ်ဒူးကြီးထံသို့ ရောက်ရပြန်ချေပြီ။
ဒူးကြီးက ချိတ်လုံချည်တထည် ကောက်စွပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်ရန် ပြင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်ကို မြင်သည်နှင့် ၀မ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်လေသည်။
ဒူးကြီး။ ။ ဟေ့ကောင် ကျွဲကြီး - ငါ အခုပဲ အပြင်သွားမလို့၊ လိုက်မလား ငါနဲ့။
ကျွဲ။ ။ ဘယ်ကိုလဲဗျ။ ရေခဲတောင် ဆိုရင်တော့ မလိုက်ပါရစေနဲ့။
ဒူးကြီး။ ။ (တဟက်ဟက် ရယ်ရင်း) ဟုတ်ပါဘူးကွာ။ နီးနီးနားနား လမ်းလျှောက်မှာပါကွ။ ဒုက္ခသီရိမြို့ထဲ သွားပြီး လိုအပ်တာတွေ လမ်းညွှန်မှာကြားတာမျိုး လုပ်မလို့ပါ။ ကဲပါကွာ၊ လိုက်ခဲ့စမ်းပါ သတင်းစာသမားရယ်။
ဤသို့ဖြင့် နှစ်ကောင်သား နေပြည်တော် ဒုက္ခသီရိမြို့နယ်အတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြသည်။ လမ်းမကြီးများက ကောင်းလှသည်။ လမ်းဆုံတခုအရောက်တွင် ဒူးကြီးက ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်သဖြင့် ကျွန်ုပ်လည်း ရပ်လိုက်ရသည်။
ဒူးကြီး။ ။ ကဲ - ဒီနားမှာ ထူးခြားတာ ဘာတွေ့လဲ။
ကျွဲ။ ။ တခြားနေရာတွေလိုပါပဲ၊ လူသူလေးပါး မမြင်ရဘူး။ လမ်းမီးတွေလည်း နေ့ခင်းကြောင်တောင် လင်းနေတယ်။ ဘာထူးလို့လဲ။
ဒူးကြီး။ ။ အင်း - ဒီသတင်းသမားကတော့ အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းအုံးမယ်။ (လမ်း ဆိုင်းဘုတ်တခုကို ညွှန်ပြပြီး) ဟောဒီ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဘာရေးထားလဲ။
ဒူးကြီး လက်ညှိုးထိုးပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်ုပ် အံ့သြသွားမိသည်။
ကျွဲ။ ။ ဟိုက် - သခင်တင်မြလမ်း ဆိုပါလားဗျ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ဒီလမ်းမကြီးကို သူ့နာမည် ပေးထားတာ သူတောင် မသိဘူး ထင်တယ်။
ဒူးကြီး။ ။ ဟုတ်တယ်၊ သူ မသိသေးဘူး။ ဒီတည့်တည့် ဆက်သွားရင် တွေ့မယ့် လမ်းမကြီးကိုတော့ မောင်စူးစမ်း လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။
ထူးဆန်းလှသဖြင့် အိပ်မက် မက်နေသလားဟုပင် ထင်ရသည်။
ကျွဲ။ ။ မြန်မာပြည်မှာ လမ်းနာမည် အများစုက သေပြီးတဲ့သူတွေရဲ့ နာမည်ချည်းပဲ။ ဒုက္ခသီရိမှာတော့ အဲဒါနဲ့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတာ အံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ။
ဒူးကြီး။ ။ သူတို့ ၂ယောက်က နိုင်ငံတော်အကျိုးပြုစာတွေ ရေးကြတော့ ထိုက်တန်စွာ ဂုဏ်ပြုရတာပေါ့ကွာ။ သူတို့၂ယောက်တင် မကဘူး၊ ဟောဒီ ဒုက္ခသီရိမြို့မှာ ငါ ဂုဏ်ပြုချင်တဲ့သူတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ လမ်းတွေချည်းပဲကွ။
စကားတပြောပြောဖြင့် လမ်းလျှောက်လာစဉ် လမ်းသွယ်တခုထိပ်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်တွင် နိုင်ငံရေးသမားတဦး၏ အမည်ကို တွေ့ရသည်။
ကျွဲ။ ။ ဦးသုဝေ လမ်းသွယ် ဆိုပါလားဗျ။
ဒူးကြီး။ ။ အေး - ဟုတ်သကွ။ ငါတို့ကို စနစ်တကျ တပ်ဆုပ်နေတယ်လို့ ပြောတဲ့ ဆရာဦးသုဝေပေါ့ကွာ။ သူ့ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုရတာပေါ့။ ဟီးဟီး - ငါတို့က စနစ်တကျ တပ်ဆုပ် သလိုလိုနဲ့ စနစ်တကျ လည်ပင်းညစ်နေတယ်ဆိုတာ သူ မသိရှာသေးဘူး။ အဟက်ဟက်ဟက် --
“---ဟီးဟီး - ငါတို့က စနစ်တကျ တပ်ဆုပ် သလိုလိုနဲ့ စနစ်တကျ လည်ပင်းညစ်နေတယ်ဆိုတာ သူ မသိရှာသေးဘူး။ အဟက်ဟက်ဟက်---”
ဒူးကြီး၏ ခြောက်သွေ့သွေ့ရယ်သံများ၊ ရှင်းလင်းချက်များကို မကြားတချက် ကြားတချက်။ ကျွန်ုပ်က လမ်းအမည်များကိုသာ အအံ့သြကြီး အံ့သြနေမိသည်။
ကျွဲ။ ။ ဟာ - ဟိုမှာ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းလမ်းသွယ်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေလမ်းသွယ်။ ဂုဏ်ပြုထားတာပဲလား။ သူတို့ကိုတော့ ဘာကြောင့် လမ်းမကြီးနာမည်တွေ မပေးရတာလဲ။
ဒူးကြီး။ ။ ဟဲဟဲဟဲ - ဒီကောင်တွေက ငါတို့ လမ်းပြမြေပုံကို ထောက်ခံလို့ ဂုဏ်ပြုထားတာ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ကို ပူးသတ်မယ်ဆိုလား ဘာဆိုလား အဲဒါမျိုး ဆိုတော့ အရမ်း ယုံလို့ မရသေးဘူးလို့ ငါ့တပည့်တွေက ပြောလို့ လမ်းမကြီးနာမည် ပေးလို့ မဖြစ်ဘူး။
နှစ်ကောင်သား ဆက်လျှောက်ကြသည်။ ဒူးကြီးက ဒုက္ခသီရိမြို့နယ်အတွင်းမှ လမ်းအမည်များ အကြောင်းကို အာဘောင်အာရင်း သန်သန်ဖြင့် အဆက်မပြတ် ပြောပြသည်။
ကျွဲ။ ။ ဟိုက် - ဒီလမ်းလေးက ဗိုလ်ခင်ညွန့်လမ်း တဲ့။ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ခင်ညွန့်လား။
ဒူးကြီး။ ။ သိပ် ဟုတ်တာပေါ့။ ဒီခွေးမသားကို ငါ မကြိုက်ပေမယ့် ငါတို့ကို ကောင်းကောင်း အကျိုးပေးခဲ့တဲ့ကောင်ပေပဲ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့၊ ထောင်ထဲမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း သေအောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေမှာ အရမ်း အားကိုးရတာကွ။ ကဲ - ငါလည်း ခြေညောင်းပြီ သတင်းထောက်ရေ။ ဟော - ဟိုက ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာ မင်း ဖတ်လိုက်အုံး။ ဖတ်ပြီး ငါတို့ လှည့်ပြန်ကြစို့။
ဒူးကြီး ပြောသည့် ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရှစ်လမ်းသွား လမ်းမကြီး၏အမည် ဖြစ်သည်။ ထိုဆိုင်းဘုတ်ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်ုပ် မျက်လုံး ပြူးထွက်သွားလေသည်။
ကျွဲ။ ။ ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီ လမ်းမကြီး ဆိုပါလား။ ဒီလူကြီး နာမည်က ဘယ်လိုဘယ်လို ဒီရောက်နေတာလဲ။
ဒူးကြီး မျက်လုံးများ အရောင်တလက်လက် တောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်မေးသည်ကို ချက်ချင်း မဖြေဘဲ “ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီ လမ်းမကြီး” ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်တိုင်ကို ပွေ့ဖက်နေပုံက ကဒါဖီကို အလွန်တရာ ဂုဏ်ယူ လေးစားစိတ် ကြီးမားကြောင်း ပေါ်လွင်နေသည်။
ဒူးကြီး။ ။ လေးစားလွန်းလို့ ဒီလမ်းကို သူ့နာမည် ပေးထားတာဟေ့။ လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြတာကို သူက လက်နက်မျိုးစုံ သုံးပြီး ရှင်းတယ်၊ လေယာဉ်ပျံတောင် သုံးတယ် တဲ့။ ကဲ - ငါက သူ့ကို မလေးစားရင် ဘယ်သူ့ကို လေးစားရမလဲ။
ကျွဲ။ ။ အဘ - ဒီငနဲကြီးက ဆင်းပြေးရတော့မှာနော်၊ အားကျ မနေနဲ့။
ဒူးကြီး။ ။ သူ့အတွက် စိတ်မပူစမ်းပါနဲ့ကွာ။ နေပြည်တော် ပြေးလာဖို့ ငါ လှမ်းပြောပြီးပြီ။ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ပေးမယ်လို့လည်း အာမခံထားတယ်။
ခက်ပြီ။ အမှန်တကယ် ခက်ပြီ။ ဒီ လူလွန်မသား အာဏာရှင်ကြီး၂ဦး ပေါင်းမိပါက ဒုက္ခ နှင့် လှလှ တွေ့ကြတော့မည်ဟု တွေးနေမိသည်။ ဒူးကြီးကို နှုတ်ဆက်ပြီး လှည့်အပြန်တွင် ဒူးကြီးက အောက်ပါအတိုင်း လှမ်းအော်ပြောလေသည်။
ဒူးကြီး။ ။ ဟဲဟဲ - ဘယ့်နှယ်လဲ သတင်းထောက်။ အံ့သြသွားသလား။ ဒါ အစပဲ ရှိသေးတယ်။ ကဒါဖီအတွက် “အေးချမ်းသာယာရေး” ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ဆိုပြီး ဖန်တီးမယ်၊ ကဒါဖီကို ပေးမယ်လို့ ပြောထားပြီးပြီ။ သူ လက်ခံမယ် ဆိုတာနဲ့ ပေးလိုက်ရုံပဲ။ မင်းတို့ သတင်းရေးဖို့သာ ပြင်ပေတော့။ ဟားဟားဟား -
ဒူးကြီးက ထိုသို့ ခြောက်ကပ်ကပ် အော်ရယ်ပြီး ဒုက္ခသီရိမြို့ရှိ သူ၏ နန်းတော်သို့ ပြန်သွားလေသတည်း။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး : ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် နှင့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ (၃)
ရုရှားနိုင်ငံ ချက်ချညေးယားခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှု။ ။ ကောကေးဆက်တောင်တန်းသား မွတ်စလင်အများစု နေထိုင်တဲ့ ချက်ချညေးယားရီပတ်လစ်ဒေသ ငယ်ဟာလည်း ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်းထဲက ခွဲထွက်ဖို့ ဆန့်ကျင် လှုပ် ရှားလာတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်လာပြီဖြစ်တယ်။ သူတို့ဒေသကိုရုရှား ဇာဘုရင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာကို တက်တက် ကြွကြွဆန့်ကျင်လာသလို၊ ၁၉၁၇ ခုနှစ် ကွန်မြူနစ်တို့ ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားခြင်းကိုလည်း တွန်းလှန်နေခဲ့ ကြ တယ်။ ဇာဘုရင်ပြုတ်ကျသွားတုန်းက ချက်ချညေးယားဟာ ခဏတဖြုတ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ် အိမ်နားနီး ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီး တောင်တန်းဒေသ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်ရီပတ်ဗလစ် သမတနိုင်ငံဖွဲ့ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်နှစ်မှာဘဲ ရုရှားကသိမ်းပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလမှာတော့ ချက်ချညေးယန်း ညီအစ်ကို နှစ် ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခါဆန်အစ္စရေလောဗ် နဲ့ ဟူစိန် တို့က အတော်အတန်များပြားတဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်ကိုစုစည်းကာ နယ်မြေအများအပြားကို သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင် ခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ သဘောအနေနဲ့ပါ။ ကမ္ဘာစစ်ပြီး တော့စတာလင်စစ်တပ်က ပြန်သိမ်းပိုက်လိုက် ပြန်ပါ တယ်။ စတာလင်အစိုးရရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံဟာ ချက်ချညေးယားတွေအတွက် ကမ္ဘာကျေသော်လည်း ဥဒါန်းမ ကျေနိုင် လောက်အောင် စိတ်မျိုးခံစားရစေခဲ့ပါတယ်။
စတာလင်အစိုးရဟာ ချက်ချညေးယား- အန်းဂတ် ရီပတ်ဗလစ် ဒေသသားအားလုံးကို (လူထု ၄ သိန်းမှ ၈သိန်း အထိခန့်မှန်း) ဒေသကွန်မြူနစ်ရုံး အသီးသီးသို့ ဆင့်ခေါ်စေကာ ဂျာမန်နာဇီတွေကို ကူညီတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ရာသီဥတု ဆိုးရွားလှတဲ့ ဆိုက်ဘေးရီးယားဒေသနဲ့ ခါဇက်စ္စတန်ဒေသများဆီသို့၊ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် ချက်ချညေးယားနယ်မြေကို အိမ်နားနီးချင်းဒေသ နယ်မြေတွေ ထဲပေါင်းထဲ့ပေးလိုက်တယ်။ ချက်ချညေး ယားတွေအခြေချနေထိုင်တဲ့ဒေသကို မြေပုံထဲကနေဖျက်လိုက်တယ်၊ ချက်ချညေးယား စာနဲ့ရေးထား တဲ့အဖိုးတန် သမိုင်းတွေနဲ့အခြား စာအုပ်တွေကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်၊ စာကြည့်တိုက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ ချက်ချညေးယား လူမျိုး ၇၀၀ ကို အဆောက်အဦးထဲမှာသော့ခတ်ပြီးမီးရှို့သတ်ခဲ့တယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်၊ အစာရေစာ ငတ်ပြတ်မှု ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုဒဏ် မခံနိုင်တာကြောင့် ဆိုက်ဘေးရီးယားကိုပို့ခံရသူ ၁ သိန်း ၇သောင်းကနေ ၂ သိန်းအထိ လေးနှစ်အတွင်းမှာ သေဆုံးသွားတယ်ခဲ့ရတာတွေဟာ သမိုင်းရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအဖြစ် ချက်ချ ညေးယားမျိုးဆက်တိုင်းကိုအမှတ်ရစေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသေဆုံးမှုကို ဥရောကကောင်စီက အစုလိုက် အပြုံ လိုက်သတ်ဖြတ်မှု (ဂျီနိုဆိုက်)လို့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင် စတာလင်သေပြီး လေးနှစ်အကြာ မှာ တော့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရသူတွေကိုပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ချက်ချညေးယား နဲ့ အန်းဂတ်ရီပတ်ဗလစ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ နယ်ပယ်ကတော့ အရင်က လိုမဟုတ်တော့ဘဲကျဉ်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့တွေပြန်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့မူလ အိမ်ခြံတွေ ကို အခြားလူမျိုးစုတွေကို နေရာချထားပြီးဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်နောင်မှာ လူမျိုးရေးမှုန်းတီးမှု၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ချက်ချညေယားတွေရဲ့ ခွဲထွက်လိုစိတ်ဟာ တခြားဒေသက သူတွေထက် ပြင်း ထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ဆိုဗီယက်ရှားပြည်ထောင်စု(ဟောင်း) အဖို့ ကမ္ဘာမီးလောင်နေတဲ့အချိန် ဆီးမီးခွက်တွေထ တောက် ဆိုသလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး(ယူအက်စ်အက်စ်အာ)ဖျက်သိမ်းရတော့ မဲ့ အခြေအနေအကြပ်အတည်းဖြစ်နေစဉ် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံထဲက ဖက်ဒရေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တချို့တို့က အကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့၊ ခွဲထွက်ရေးတို့အတွက် လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ချက်ချညေးယားကလည်း တခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာဘုရင်ခေတ် သိမ်းပိုက်ခံရပြီး ကတည်းက ခေတ်အဆက်ဆက် ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ ချက်ချညေးယား ဟာ အခုလိုအခွင့်အရေးပေါ်လာတာနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ် ကျေညာပါတယ်။ အတိုက်အခံပါတီ ကြီးဖြစ်တဲ့ (All-National Congress of Chechen People) ကရွေးချယ်တင်မြောက်ပေးလိုက်တဲ့ ဇိုခါရ်ဒူဒါယဲဗ် (ဆိုဗီယက်ရုရှားလေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း- ၁၉၉၆ မှာ ရုရှားစစ်တပ် အမြှောက်ကျည်ဆံထိမှန်၍ကျဆုံး) က ဦး ဆောင်ပါတယ်။ ချက်ချညေးယားလူများစုကလည်း ထောက်ခံပါတယ်။ ဂျော်ဂျီယာ သမတနိုင်ငံ သမတ ဇဗစ်ဂမ် ဆပ်ဂူဒီးယာက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အခြားဘယ်နိုင်ငံကမှ အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ တရားဝင် မဟုတ်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဘာသာကိုယ် လွတ်လပ်ရေးကြေညာ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံလေးအဖြစ်တည်ရှိခဲ့တယ်။
၁၉၉၁ ခုနဲ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်း ချက်ချညေးယားမှာ လူမျိုးစု ပဋိပက္ခတွေ၊ အာဏာလွန်ဆွဲပွဲတွေဖြစ်နေချိန် ၁၉၉၄ မှာ ရုရှား စစ်တပ်က ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရှရှားစစ်တပ်က လေကြောင်းအကူ တိုက်ခိုက် မှုတွေအပါအဝင်ထိုးစစ်ကြီးများဖြင့် နယ်မြေအတော်များများ ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီး အဓိကကျတဲ့ တောင်တန်း တွေပေါ်မှာ တပ်စွဲထားနိုင်ပေမဲ့ ချက်ချညေးယားတွေက ပျောက်ကျားစနစ်နဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့ အ တွက် ရှရှားဖက်ဒရယ်တပ်က အထိနာလာပါတယ်စိတ်ဓါတ်တွေကျဆင်းလာပါတယ်။ တဖက်တွင်လည်း စစ်တပ် က အရပ်သားတွေအပေါ်မတရားပြုမှုတွေကို လူအခွင့်အဖွဲ့တွေကဖေါ်ထုတ် ရှုတ်ချလာကြပါတယ်။ ယူရိုပီယံ ယူနီယံ(အီးယူ) ကလည်း စစ်ဆင်ရေးများရပ်တန့်ပြီး နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် အဖြေရှာရန် ရုရှားကိုတိုက်တွန်းလာပါတယ်။ ရှရှားနိုင်ငံကလူများ စုကလည်း အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတာကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့ အတွက် ၁၉၉၄ မှာ ရုရှားသမတ ဘောရစ်ယဲလ်ဆင်နဲ့ ချက်ချညေယား သမတသစ် အာဆလာန် မာစ်ကာဒေါဗ် (ဒူဒါယဲဗ်အား ဆက်ခံသူ) တို့ ဦးဆောင်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း နှစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှုတွေကိုတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အကုန်လောက်မှာ အပြီးသတ်မှာဖြစ် တယ်။ အဓိကကျတဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကိစ္စကပြေလည်မှုမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၉မှာတော့ ချက်ချညေးယား တပ်က နယ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ ဒါဂျစ္စတန်ပြည်ကို စစ်ကူပေးတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ စစ်ပြန်ဖြစ်ပွားတယ်။ ရုရှား စစ် တပ်က ပြင်းထံတဲ့၊ စစ်ဆင်ရေးများနဲ့ ချက်ချညေးယားကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားရဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း ပုံစံစစ်ဆင်ရေး၊ ကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာက အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမတ ဘင်ကလင်တန်က ရုရှားဟာ သူ့လုပ်ရပ်အတွက် ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကို ပေးဆပ်ရပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရော်ဘင်ကွတ်က ကိုဆိုဗိုမှာ မီလိုဆေးဗစ် ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချသလို ချက်ချညေးယားမှာ ရုရှားရဲ့လုပ်ရပ်ကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ အဲသလို နိုင်ငံတ ကာကဝေဖန်တဲ့ အခါမှာတော့၊ အကြမ်းဖက် ကင်ဆာရောဂါ မပြန့်ပွားလာခင် ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ရှရှားရဲ့တာဝန်ကို ပြင်ပက ဝေဖန်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ရုရှားသမတ ဗောရစ်ယဲလ်ဆင်ကဆုိုလိုက်ပြီး ချက်ချညေးယား ခွဲထွက်ရေးသမား များကို အကြမ်းဖက်သမားတံဆိပ်ကပ်လိုက်ပါတယ်။
၁၁/၉ စက်တင်ဘာ(အမေရိကန်ဝေါထရိတ်စင်တာ) အရေးအခင်းကိစ္စ အပြီးမှာတော့ ချက်ချညေးယား ခွဲထွက် ရေး လှုပ်ရှားမှုအပေါ် နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှု အာစေးကပ်လာပါတော့တယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ ရုရှားသမတ ဗလာဒီမာပူတင်က ချက်ချညေးယားကိုတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပြီး အာမတ်ကာဒီရောဗ် (ပထမစစ်ပွဲမတိုင်မီနှင့် စစ်ပွဲ အပြီးတွင်ချက်ချညေးယား အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး ဒုတိယစစ်ပွဲကာလတွင် ရုရှားဘက် သို့ဘက်ပြောင်း သွားသူ- ၂၀၀၄ တွင်ဗုန်းခွဲ လုပ်ကြံခံရ)ကို အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲခန့်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ချက်ချညေးယား အခြေခံဥပဒေသစ်ကို လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူအများ စုကတော့မကျေလည်ဘူးလို့ ဆိုပါ တယ်။ နောက်ရုရှား က မကထပြုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ အာမတ်ကာဒီရောဗ် သမတဖြစ်လာ ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ချက်ချညေးယားလွတ်လပ် ရေးတပ်ရဲ့ အဓိကတပ်မှူး ရှမီလ်ဗာဆာယဲဗ် ကို အမေရိကန်အစိုးရ က ၂၀၀၃ နှစ်မှာ အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ချက်ချညေးယား လွတ်လပ်ရေးတပ်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းနေစဉ် ရှရှားအထူးတပ်ဖွဲ့ လက်ချက်နဲ့ ချက်ချညေးယား သမတ (ဟောင်း) မာစ်ကာဒေါဗ် လည်းကျဆုံးသွားပါတယ်။
ဆိုရရင် ချက်ချညေးယား လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ကလွတ်လပ်ရေးလည်းကျေညာနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကာလတခု အ ထိ အစိုးရဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ရုရှားရဲ့ပြင်းတန်တဲ့ထိုးစစ် နှစ်ကြိမ်အနက်၊ ဒုတိယ ထိုးစစ်အပြီး မှာတော့ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေအင်အားလျော့ပါးသွားတယ်ခဲ့တယ်။ ပျောက်ကြားအသွင်လောက်နဲ့သာ ဆက်လက် ရှင်သန် တိုက်ပွဲဝင်လျှက်ရှိနေပါတယ်။
တိဘက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု။ ။ တရုပ်ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံထဲကနေ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမားက ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလှုပ်ရှားလာရတဲ့ နောက်ကြောင်းကတော့ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ တရုပ်စစ်တပ်ဟာ တိဘက်ပြည်ကို ဝင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ် မေလမှာတော့ တရုပ်အစိုးရနဲ့ တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား ဦးဆောင်သည့်အာဏာပိုင်တို့က လက်ရှိနိုင်ငံရေးစနစ်အားမပြောင်းရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု လွတ်လပ်မှုရှိရေး၊ ဗဟိုမှအတင်းအကြပ်မပြုရေး၊ အပါအဝင် အချက် ၁၇ချက်ပါ သ ဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ(တိဘက်အုပ်ချုပ်အောက်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့ တိဘက် လူမျိုးများ နေထိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ ) Kham, Amdo နှင့် ဇီချွှမ် တောင်ပိုင်း အချို့ ဒေသတွေမှာလယ်ယာ မြေပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအကြောင်းပြုပြီး အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတွေပေါ်လာတယ်။ အဲဒါ တိဘက်ပြည်ကိုလည်း ကူးစက်လာတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိုအကြောင်းပြုပြီး ကွန်မြူနစ်အစိုးရက ဖိအားပေးစွက်ဖက်လာပါတယ်။ ၁၉၅၉ တင်းမာမှုများပိုများလာပြီး ကွန်မြူနစ် တရုပ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာတယ်။ တရုပ်အစိုးရ စစ်တပ်က တိဘက်ထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်နှင်းတယ်။ ၁၉၅၉ မတ်လအကုန်လောက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား အိန္ဒိယပြည်ကို တိမ်းရှောင်သွားပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒရမ်ဆာလာမြို့ အခြေစိုက် အဝေးရောက်အစိုးရ အဖွဲ့ ဖွဲ့တယ်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တုန်းက ဘေဂျင်း အစိုးရနဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်ဟာ ဖိအားပေးမှုအောက်က ချုပ်ဆိုခဲ့ရ ကြောင်း၊ ထိုစာချုပ်ပါအချက်များကို တရုပ်အစိုးရကချိုးဖေါက်ခဲ့ကြောင်း အဝေးရောက်အစိုးရ ဒလိုင်လားမားက ဆိုပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား ဟာ တိဘက်ပြည်လွတ်လပ်ရေးပြန်ရဖို့အတွက် အကြမ်းမဖက်နည်းနဲ့ ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ အခုနှစ်ပေါင်း ၅၀ ရှိလာပါပြီ။
တိဘက်ပြည်လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လို့ သမိုင်းကြောင်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများရှိပါတယ်။ တရုပ်တို့က Yuan Dynasty ယူဝမ်မင်းဆက် ၁၂၇၁ ခုနှစ် ကတည်းက တိဘက်ဟာ တရုပ်ပြည်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုတယ်။ တိဘက်တို့ကတော့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တိဘက်နိုင်ငံအဖြစ်ခံယူကြတယ်။ ၁၃ ပါး မြောက် ဒလိုင်လားမား က မွန်ဂိုလ် ဘုရင် ဂျင်ဂစ်ခန် နှင့်အာလ်တာခန်လက်ထက်၊ တရုပ်မှင် မင်းဆက်နဲ့ မန်ချူး ချင်မင်းဆက် လက်ထက်များမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဘဲရှိတယ်၊ လက်အောက်ခံ အနေနဲ့ ဆက်ဆံတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ တိဘက်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှာပြောဆိုခဲ့ပါ တယ်။ လက်ရှိဘုန်းတော်ကြီး ၁၄ ပါးမြောက် ဒလိုင်လားမား ကလည်း တိဘက်နိုင်ငံဟာ ရှေးကတည်းက လွတ် လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုလျှက်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာတော့ တိဘက်လွတ်လပ်ရေးအပေါ်သဘောထားများက မတူကြပါဘူး။ အမေရိကန်၊ ဗြိတိသျှ၊ ဥရောပယူနီယံ(အီးယူ)စတဲ့ အစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းများက တိဘက်ဟာ တရုပ်ပြည်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆို ကြတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရှေ့နေအများစုက တိဘက်ပြည်ဟာ ဥပဒေအရလွတ်လပ်ရေးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်က စပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ တရုပ်ပြည်မအစိုးရတို့ အကြားဆွေးနွေး ပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒလိုင်လားမား ကိုယ်စားလှယ်များဘက်က တရုပ် တပြည်ထောင်အတွင်းမှာ ( ခွဲထွက်ရေး ဒါမှမဟုတ် လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ မပါဘဲ) စစ်မှန်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးရဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တရုပ် အ စိုးရက အဲဒီအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုနည်းနေပြီး လက်မခံနိုင်သေးပါဘူး။
ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအပေါ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ဖိအား အရေးပါမှု။
ခွဲထွက်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေ၊ ခွဲထွက်ရေး သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားဆဲနိုင်ငံတွေကြည့်ရင် နိုင်ငံတကာရဲ့ အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများစရဲ့ထောက်ခံဖိအားပေးမှုဟာ အရေးပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတ ကာထောက်ခံမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု မရဘဲ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရယ်လို့ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ သေချာပါတယ်။
ဥပမာ သီရိလင်္ကာက တမီလ်တိုင်ဂါးအဖွဲ့ဟာ တဖက်သတ် လွတ်လပ်ရေးကြေညာကာ နယ်မြေအတော်များများ ကို အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိ အုပ်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ချက်ချညေးယား ခေါင်းဆောင်များကလည်း ချက်ချ ညေးယားနိုင်ငံကို အခြေခံဥပဒေတောင်ပြဋ္ဌာန်းပြီး လေးနှစ်လောက်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ အာဇာဘိုင်ဂျန် နိုင်ငံ ထဲက နဂါနိုဂရာ ဘတ် ဒေသဟာလည်း ခွဲထွက်သူများ အတန်ကြာသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ထားပေမဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကမှ သူတို့ လွတ်လပ်ရေးကိုမထောက်ခံပါဘူး။ သူတို့ကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အသိအမှတ် မပြုပေး ခဲ့ကြဘူး။ နဂါနိုဂရာဘတ်ဆိုရင် သူ့ကိုစစ်ကူပေးတဲ့ အာမေးနီးယားသည်ပင်သူ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကို အသိအ မှတ်မပြုပေးခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် အဲဒီဒေသတွေဟာ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံရယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သမိုင်းမှာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုဆိုဘိုဒေသကိုတော့ လူမျိုးသုတ်သင်ခံရခြင်းနဲ့ ဆိုးရွား စွာ အဖိနှိပ်ခံရခြင်းအခြေခံအောက်မှာ နိုင်ငံတကာက ဝိုင်းဝန်းအသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက် လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ တခုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ ချက်ချညေးယားမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုမျိုးတွေဟာ ကိုဆိုဗိုမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေ နဲ့ မကွာခြားလှဘူးလို့ဆိုကြပေမဲ့ လွတ်လပ်တဲ့သမိုင်းအခိုင်အမာရှိတဲ့ချက်ချညေးယားကတော့ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမခံရပါဘူး။ အရှေ့တီမောနဲ့ အာချေးတို့ဟာ အင်ဒိုနီးရှားက ခွဲထွက်ဖို့ လှုပ်ရှားခဲ့ကြ တာခြင်းအတူတူ၊ အရှေ့တီမောက လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ပြီး၊ အာချေးကတော့ မခံရပါဘူး၊ နိုင်ငံတကာက အာချေးကို အဆင့်မြှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ကိုလက်ခံဖို့ သာတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ တိဘက် အနေအထားကိုတော့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ပညာရှင် ရှေ့နေအများစုက လွတ်လပ်တဲ့သဘောကို လက်ခံထားပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများက တိဘက် ကို တရုပ်ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလို့သာလက်ခံထားကြပါတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံဟာကုလသမဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဗီတိုအာဏာပိုင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်၊ စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ လည်းဖြစ်၊ ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်အမေရိကန်တို့၏ ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့ အတွက် တရုပ်ရဲ့ငြိုငြင်မှု ခံ ရမှာစိုးလို့တရုပ်ပြည်ထဲက ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှု တွေကို မထောက်ခံတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ။
ခွဲထွက်ရေးကို အားပေးထောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများရဲ့ခေါင်းဆောင်များက ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံငယ်များ မှိုလိုပေါက်လာမှာကို မလိုလားသသည့်သဘောရှိသလို ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုသည့် ပြဌာန်းချက် ကိုလည်း ပစ်ပယ်လို့မရတဲ့သဘောရှိတယ်။ ဒီတော့ကာ ဒီနှစ်ခုအကြားက (လွတ်လပ် တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ထောက်ခံ ရေး၊ မထောက်ခံရေး) လိုသလို မူ ချသွားနေကြတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ ပြောရရင် နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်၊ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကို ကြည့်ကာ မူချ ကြတာသာဖြစ်တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရဆိုတာထက် နိုင်ငံတကာအစိုးရ(အထူးသဖြင့်အီးယူနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရ)များက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ်မှာထားတဲ့ မူ သ ဘောထားက ပိုသြဇာသက်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်း ခွင့်ဆိုတာကို တိကျတဲ့အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်ဆောင်ဖွင့်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသမျှ၊ ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှား သူများအဖို့ ကံကောင်းလွန်းအားကြီးမှ ခွဲထွက်ခွင့်ရ မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
၂၈ ရက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
ဗုံးကွဲအပြီး လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ခံတွေ စိတ်ပျက်
By မအေးအေးမာ တနင်္လာ, 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
လူတချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ပေါက်ကွဲမှုအပြီး လုံခြုံရေး အစီအမံတွေ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရာမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာ အလွန်အကျွံ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ ခရီးသည်တင်ကားတွေ၊ လူနေရပ်ကွက်တွေမှာ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးတာတွေ၊ ဖမ်းဆီးတာတွေအထိ လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တွေက လုပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် မအေးအေးမာက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက ပေါက်ကွဲမူတခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း လုံခြုံရေးတွေကို တိုးချလာရာမှာ ရန်ကုန် ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း အမှတ် ၂ လမ်းမကြီးပေါ်က ကျောက်လမ်းဂိတ်နဲ့ မစိုဂိတ်မှာ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ မီးသတ်များ ချထားပြီး ခရီးသည်တင်ကားတွေကို စစ်ဆေးရာကနေ ခရီးသည်တွေနဲ့ အချေအတင် ဖြစ်ကြရတဲ့အထိ ကြုံရတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီလို ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်တိုင်းမှာ အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မှုတွေ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာလေ့ရှိပြီး အခုနောက်ဆုံး ဆိုရင်လည်း အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ခရီးသည်တွေထဲက တချို့ဆိုရင် မသင်္ကာတဲ့အတွက်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထိ ကြုံနေရတယ်လို့ မျက်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ခရီးသည်တဦးက ပြောပြပါတယ်။
“ခရီးသည်ကို သူက အိတ်ဖွင့်ခိုင်းတယ်၊ ခရီးသည်ကလည်း အိတ်ဖွင့်ပေးတယ်။ နောက် ခင်ဗျားက ဘာတာဝန်လဲလို့ မေးတော့ မင်းက ငါ့မေးရလား ဘာလားဆိုပြီး လက်သီးနဲ့ ထိုးမလို့ လုပ်တယ်။ ထိုးမလို့လုပ်တော့ စကားများတာပေါ့။ ခင်ဗျားဖွင့်ပေးခိုင်းတဲ့အတိုင်း ကျုပ်ဖွင့်တယ်၊ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ ကျုပ်ကို ထိုးဖို့လုပ်တာလဲဆိုတော့၊ အဲဒီအချိန်မှာ နောက်က တွယ်စီးလာတဲ့ အထဲက လူတယောက်က နေပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ ခရီးသည်တွေကို ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံပါ၊ ပြေပြေလည်လည် ဆက်ဆံပါ၊ အခုလိုပုံစံမျိုး မဆက်ဆံပါနဲ့ ဆိုတော့ စောစောက အိတ်ဖွင့်ပေးတဲ့ ကလေးကိုရော၊ အောက်ကပြောတဲ့ ကလေးကိုပါ မင်းတို့က ဘာကောင်တွေလဲ ဆိုပြီးတော့ အတင်းဆွဲပြီးတော့ လက်ထိပ်ခတ်ကွာ၊ ဘာညာနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီ ၂ ယောက်ကို ထားခဲ့ရတယ်။
“သူတို့က ပြောသွားသေးတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ လုံခြုံရေးအတွက်ပါတဲ့။ သူတို့ပြောတဲ့ ပုံစံက ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထု လုံခြုံရေးအတွက် ရှာတာပါလို့ ပြောတယ်။ ပြောပြီးတော့ တကယ်တမ်း အဲဒီ ၂ ယောက် ဖမ်းသွားတော့လည်း အဲဒီလူတွေဆီက ဘာပစ္စည်းမှလည်း သူတို့ မိတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာသက်သေ အထောက်အထားမှ မရှိဘဲနဲ့ လက်ထိပ်ခတ်ကွာဆိုပြီး လက်လွတ်စပယ် ပြောတယ်။ အတင်းအဓမ္မ ထိုးမယ်၊ ကျိတ်မယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အတင်းဆွဲခေါ်သွားတယ်။ အဲဒါ ပြည်သူလူထု လုံခြုံရေးလား၊ ပြည်သူလူထုကို ယူနီဖောင်းဝတ် မြင်တိုင်း ထိုင်ရှိခိုးမတတ် ကြောက်ရအောင် လုပ်နေတာလား။”
အလုပ်ကပြန်လာတဲ့ ခရီးသည်တွေ အနေနဲ့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိဘဲ အခုလို ဖမ်းတဲ့ဆီးတဲ့ အဖြစ်မျိုးအထိ ကြုံနေရတဲ့ အတွက်လည်း ကျန်ခရီးသည်တွေ အနေနဲ့ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အဲတော့ ပြည်သူလူထု လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုတဲ့ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပြည်သူတွေကို ချေချေငံငံ၊ ပြေပြေလည်လည်၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မဆက်ဆံဘဲနဲ့ ဟောက်လား၊ မန်လား၊ ကြိမ်းလား မောင်းလား၊ ထိုးမယ် ကျိတ်မယ် လုပ်တဲ့အခါကြတော့ ပြည်သူတွေကလည်း လုံးဝ မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ခရီးသည်တွေကလည်း အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်တွေလေ။ အလုပ်က ပြန်လာတဲ့အချိန်၊ မိုးကချုပ်နေတဲ့အချိန် မိသားစုဆီကို ရောက်ချင်ဇောနဲ့ ကားစီးလာကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့က အခုလို အနှောင့်အယှက်ပေးတော့ ပြည်သူလူထု ရင်ထဲမှာ ဘယ်ကောင်းမလဲဗျာ။”
အင်းစိန်မြို့နယ် ကမ်းနားလမ်းက ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီးနောက် လူနေရပ်ကွက် တချို့မှာလည်း ညဘက်မှာ ဧည့်စာရင်း စစ်ဆေးတာ၊ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးတာမျိုးတွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရလောက်အောင် အာဏာပိုင်တွေက လုပ်နေတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်နဲ့ အခုလို ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေကို အလွန်အကျွံ လုပ်နေတဲ့အတွက် လုံခြုံမှု မရှိတဲ့အပြင် ပိုလို့သာ စိုးရိမ်စိတ်တွေ တိုးစေတယ်လို့လည်း ရန်ကုန်မြို့ခံက ပြောပါတယ်။
“ဗုံးပေါက်တိုင်း ပေါက်တိုင်း အခုလို ပုံစံမျိုးတွေ လုပ်တယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီဗုံးပေါက်မှုက ပြည်သူလူထုနဲ့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးတွေက အင်မတန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေလည်း ထားတယ်။ ဒီဗုံးတွေ ဘယ်က ၀င်လာတာလဲ။ ဒီဗုံးတွေ ၀င်လာတာကို ထိထိရောက်ရောက် မတွေ့ဘူး။ ဗုံးပေါက်ပြီးသွားတော့မှ ဂိတ်တွေမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးတာ လုပ်တယ် ဆိုတာကတော့ အနာတခြား ဆေးတခြား ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။”
တနင်္ဂနွေနေ့က အဖြစ်အပျက်ဟာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း မြို့ခံတွေက ပြောဆိုပေမဲ့ အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုး မကြားရပါဘူး။
အရင့်အရင်တုန်းက အလားတူ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ အတိုက်အခံတွေ၊ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ်နဲ့လည်း အာဏာပိုင်တွေက စွပ်စွဲလေ့ ရှိပေမဲ့ အခြေအမြစ် ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်အဖြစ်နဲ့ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေကလည်း ပယ်ချလေ့ ရှိပါတယ်။
Reflecting on the International Tribunal on Crimes...
ဒီဗွီဘီ ၀န်ထမ်းများအပေါ် ရာထူးမှ ဖြုတ်သည့်ကိစ္စ စစ်...
အမေရိကန် လေယာဉ် တင် သင်္ဘော အုပ်စု မြေထဲ ပင်လယ်သို့ ...
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုများ ပြတ်တောက...
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး : ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်...
ဗုံးကွဲအပြီး လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မှုကြောင့် ရန်ကုန်ြ...
မတူကွဲပြား အမှောင်ထဲက နေ့ရက်များ